ပြင်းထန်သောစိတ်ဖိစီးမှုသည်ဆုလာဘ်ထုတ်ယူခြင်း၏အာရုံကြောဆိုင်ရာပတ် ၀ န်းကျင်အပေါ်လွှမ်းမိုးမှု (၂၀၁၂) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်ရှိညစ်ညမ်းမှု
တပ်ဦး neuroscience ။ 2012; 6: 157 ။ 2012 နိုဝင်ဘာလ 1 အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသည်။ Doi: 10.3389 / fnins.2012.00157
အန်သိုနီဂျေ Porcelli,1,* Andrea အိပ်ချ် Lewis က,2 နှင့် Mauricio R. Delgado2,*
ပြည်သူ့မကြာခဏထိုကဲ့သို့သောစူးရှသောကဖိစီးမှုအဖြစ်ဆန္ဒရှိအခြေအနေများအောက်တွင်ဆုံးဖြတ်ချက်များပါစေ။ သို့သျောလညျး, လျော့နည်းစူးရှသောကဖိစီးမှုဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းကိုသြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်သည့်အတွက်ထိုလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်. လူသိများသည်။ သုတေသနတစ်ဦးကကြီးထွားလာခန္ဓာကိုယ်ဆုံးဖြတ်ချက်များများ၏ရလဒ်များနှင့်ဆက်စပ်ဆုလာဘ်-ဆက်စပ်သတင်းအချက်အလက်ကလူလုပ်ရွေးချယ်မှုကျော်နှင့်အဓိကကတော့ striatum featuring ဦးနှောက်ဒေသတစ်ခုကျယ်ပြန့်ကွန်ယက်ကို, ဤ reward- ၏အပြောင်းအလဲနဲ့တွင်ပါဝင်ပတ်သက်သောအစွမ်းထက်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုပြုပြင်မြဲမြံစွာတည်ထားပြီး ဆက်စပ်သောသတင်းအချက်အလက်။ ထို့ကြောင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချကျော်စူးရှသောကဖိစီးမှု '' သြဇာလွှမ်းမိုးမှု၏သဘောသဘာဝအပေါ်သုတေသနအတွက်အရေးပါသောခြေလှမ်းကဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့အာရုံကြော circuitry အတွင်းဆုလာဘ်များနှင့်ပြစ်ဒဏ်များမှတုံ့ပြန်မှု modulate ဖြစ်နိုင်သည်ကိုမည်သို့ဆနျးစစျဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ကြံ့ခိုင် striatal တုံ့ပြန်မှုကျလာသောသိ - သင်တန်းသားများကိုငွေကြေးဆုလာဘ်များနှင့်ပြစ်ဒဏ်များကိုလက်ခံရရှိဘယ်မှာ - လက်ရှိစမ်းသပ်မှုမှာတော့ကျွန်တော်တစ်ဦးရိုးရှင်းသောဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့ပါရာဒိုင်းအလုပ်။ နှစ်ခုတာဝန်ပြေးတစ်ဦးချင်းစီဖျော်ဖြေဖို့ကိုချက်ချင်းကြိုတင်, သင်တန်းသားများကိုစူးရှသောကဖိစီးမှု (ဆိုလိုသည်မှာ, အအေး pressor) သို့မဟုတ်တစ်ဦးအကြား-ဘာသာရပ်များဖက်ရှင်တစ်ခုမျှစိတ်ဖိစီးမှုထိန်းချုပ်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်ထိတွေ့ခဲ့သည်။ အဘယ်သူမျှမစိတ်ဖိစီးမှုအုပ်စုသည်သင်တန်းသားများကိုရလဒ်ကိုအပြောင်းအလဲနဲ့အပေါ်အတိတ်သုတေသနနှင့်ကိုက်ညီသည့် dorsal striatum နှင့် orbitofrontal cortex အတွင်းလှုပ်ရှားမှုတစ်ပုံစံ (OFC) ပြ - အထူးသ, ပြစ်ဒဏ်ကျော်ငွေကြေးဆုလာဘ်များအတွက် differential ကိုတုံ့ပြန်မှု။ ဆနျ့ကငျြစူးရှသောကဖိစီးမှုအုပ်စုသည်သင်တန်းသားများကို '' dorsal striatum နှင့် OFC သရုပ်ပြငွေကြေးဆိုင်ရာရလဒ်များနှင့် differential ကိုလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုမရှိခြင်း sensitivity ကိုလျော့နည်းသွားသည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် acute စိတ်ဖိစီးမှုအခြေအနေများအောက်တွင်ရိုးရှင်းသောဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့်ဆက်စပ်ဆုလာဘ်များနှင့်ပြစ်ဒဏ်များကို process ဖြစ်နိုင်သည်ကိုမည်သို့အာရုံကြောဆားကစ်သို့ထိုးထွင်းသိမြင်သည်။
keywords: စူးရှသောကဖိစီးမှု, အအေး pressor, ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့, dorsal striatum, orbitofrontal cortex, fMRI, cortisol
လူ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမကြာခဏစိတ်ဖိစီးမှုအခြေအနေများအောက်တွင်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ စိတ်ဖိစီးမှုထိတွေ့မှုအမျိုးအစားကိုအခ်ါခြင်းသို့မဟုတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကိုယ်နှိုက်ဖို့မွေးရာပါ (ဥပမာအရေးကြီးသောအကျိုးဆက်များနှင့်အတူနှစ်ဦးကိုနှစ်လိုဖွယ်, ဒါပေမယ့်အဘိုးထိုက်သော options များအကြားရွေးချယ်ရာတွင်) သို့မဟုတ် extrinsic, ဆုံးဖြတ်ချက်ချ (ဥပမာ, ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးဆောင်စိတ်ဖိစီးမှုထိတွေ့သြဇာလွှမ်းမိုးတဲ့ Pre-တည်ဆဲပြည်နယ်ဖြစ်နိုင်သည် ) တစ်ဦးကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းယန္တရားအဖြစ်မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲဖို့။ ထို့ကြောင့်ဘယ်လောက်စိတ်ဖိစီးမှုထိတွေ့လွှမ်းမိုးမှုဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းကိုနားလည်အကြီးအအကျိုးစီးပွားတစ်ဦးခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာမီကအားထုတ်မှု Preston et al (စူးရှသောကဖိစီးမှုဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းအတွက်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေ modulate နိုင်သည်ကိုအကြံပြုအပ်ပါသည်။ , 2007; Mather et al ။ , 2009; Porcelli နှင့် Delgado, 2009), အေးစက် (ပြန်လည်သုံးသပ်ဘို့, Shor တွေ့မြင်, 2004) နှင့်အားဖြည့်အနာဂတ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ (Cavanagh et al လမ်းပြဖို့အရေးပါသင်ယူခြင်း။ , 2010; Petzold et al ။ , 2010) ။ သို့သော်လျော့နည်းထိခိုက်စေရလဒ်များ၏အပြောင်းအလဲနဲ့, ဆုံးဖြတ်ချက်ချ၏အရေးပါသောကဏ်ဍစိတ်ဖိစီးမှုထိတွေ့မှု၏သက်ရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်. လူသိများသည်။ လက်ရှိစမ်းသပ်မှု၏ရည်မှန်းချက်ငွေကြေးဆုလာဘ်များနှင့်ပြစ်ဒဏ်များ၏ပို့ဆောင်မှုစဉ်အတွင်းအာရုံကြော circuitry အတွက်ဆုလာဘ်-related တုံ့ပြန်မှုအပေါ်စူးရှသောကဖိစီးမှုမှထိတွေ့မှု၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုဆနျးစစျဖို့ပဲ။
ငွေရတတ်သောတိရိစ္ဆာန်စာပေကိုလည်း (ပြန်လည်သုံးသပ်ဘို့, Schultz တွေ့မြင်လူ့ဦးနှောက်ထဲမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချအကြောင်းကြားဖို့အသုံးပြုဆုလာဘ်-ဆက်စပ်သတင်းအချက်အလက် processing တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ဒေသကွန်ရက်တစ်ခု, delineated ထားပါတယ် 2006; Balleine et al ။ , 2007; Haber နှင့် Knutson, 2010) ။ ဒါဟာဆုလာဘ်-related corticostriatal circuitry prefrontal cortex ထိုကဲ့သို့သော PFC နှင့် orbitofrontal cortex (OFC) အဖြစ် dorsal နှင့် ventral striatum အပါအဝင် subcortical limbic ဒေသများလှုံ့ဆျောမှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းနှင့်အကျိုးသက်ရောက်စေ, medial အဖြစ် (PFC) ဒေသများပါဝင်သည်။ အဆိုပါမျက်နှာစာ striatum (ပြန်လည်သုံးသပ်ဘို့, O'Doherty et al တွေ့မြင်ဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့်ဆက်စပ်ရလဒ်များ၏အကဲဖြတ်ဖို့အရေးပါဆုလာဘ်-ဆက်စပ်သတင်းအချက်အလက်များ၏ပုဂ္ဂလဒိဋ္တန်ဖိုး coding ထဲမှာအထူးသဖြင့်အရေးပါမှုသည်။ , 2004; Delgado၊ 2007; Rangel et al ။ , 2008) ။ အထူးသ, တူညီတဲ့ဆုလာဘ်-related အာရုံကြော circuitry ၏အစိတ်အပိုင်းများကိုစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှု၏ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုနှင့်အတူဆက်စပ်ဇီဝကမ္မနှင့် neurochemical ပြောင်းလဲမှုများကိုတစ်ပစ်မှတ်အဖြစ်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရပြီ။
; ပြန်လည်သုံးသပ်များအတွက် sympatho-adrenomedullary ဝင်ရိုး (ဆိုလိုသည်မှာအဆိုပါကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်သို့မဟုတ်ပေးစေလိုပါတယ်၏စာနာနျဌာနခှဲ) နှင့် hypothalamic-pituitary-adrenal ဝင်ရိုး (HPA: စူးရှသောစိတ်ဖိစီးမှုထိတွေ့မှုအားဖြင့် activated နှစ်ဦးကိုဖြည့်စွတ်ဇီဝစနစ်များကိုဦးနှောက်ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ဒေသများတွင်သြဇာလွှမ်းမိုးစေခြင်းငှါ , Ulrich-Lai နဲ့ Herman တွေ့မြင် 2009). စိတ်ဖိစီးမှု-related homeostatic နှောင့်အယှက်မှတုန့်ပြန်မှာစာနာပေးစေလိုပါတယ်လျင်မြန်စွာ catecholamines များလွှတ်ပေးရေး (, CA; ဥပမာ noradrenaline) နဲ့တုံ့ပြန်သည့် adrenal medulla ကနေနှင့် brainstem နှင့်အတူဆက်သွယ်ရေးအတွက်, CA အာရုံခံကွှ။ Cannon, ပုရံနှောက်အာရုံကြောစနစ်, CA လွှတ်ပေးရေးနှောင့်အယှက် (ဆိုလိုသည်မှာယင်းဂန္ "စစ်တိုက်ခြင်းသို့မဟုတ်-လေယာဉ်ခရီးစဉ်" တုန့်ပြန်၏အရင်းအမြစ်နှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်တစ်ခုသက်ရှိ enable သောခန္ဓာကိုယ်အတွင်းလျင်မြန်စွာ excitatory ပြောင်းလဲမှုများကိုအားပေးအားမြှောက်အဖြစ် 1915), အ brainstem ထံမှ homeostatic ပြတ်တောက်၏အချက်ပြသည့် hypothalamus ၏ paraventricular နျူကလိယမှစီမံချက်များမှတဆင့် HPA ၏ activation မှကူညီသည်။ တစ်ဦးနှေးကွေးအရှိန်အဟုန်မှာဆက်လက်မလုပ်ဆောင်, HPA activation နောက်ဆုံးမှာ adrenal cortex (လူသားတွေအတွက်ဆိုလိုသည်မှာ cortisol, ကြွက်များတွင် corticosterone ထံမှ glucocorticoids များလွှတ်ပေးရေးအတွက်ရလဒ်များ; Lupien et al ။ 2007).
ယေဘုယျအားစူးရှသောစိတ်ဖိစီးမှု၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု Joel et al (ထိုမှတ်ဉာဏ်၏အခြေအနေတွင်နှင့်အခြားမှတ်ဉာဏ်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်လေ့လာခဲ့လျက်ရှိသည်။ , 2006), ဒါပေမယ့်ဒီထက်ဆုလာဘ်-ဆက်စပ်သတင်းအချက်အလက်အပြောင်းအလဲနဲ့အပေါ်စိတ်ဖိစီးမှု၏သက်ရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်. လူသိများသည်။ တစ်ခုမှာထင်ရှားတဲ့အယူအဆ, စိတ်ဖိစီးမှုတဦးတည်းရဲ့လက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်မှအာရုံမခံစားနိုင်သောဖြစ်ကြောင်းအလေ့အထ-based ဆုံးဖြတ်ချက်များဆီသို့ရည်မှန်းချက်-oriented ဆုံးဖြတ်ချက်ချနေပြောင်းကုန်ပြီမြှင့်တင်ရန်စေခြင်းငှါ, အချို့အခင်းအကျင်း (Schwabe နှင့် Wolf ကအတွက် maladaptive ဖြစ်နိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ 2011; Schwabe et al ။ , 2012) ။ ဤဆုလာဘ်-related သင်ယူမှုနှင့်အလေ့အထ-based ဆုံးဖြတ်ချက်များ (ဥပမာ Delgado တွင်ပါဝင်ပတ်သက် striatal ဒေသများဖွဲ့စည်းပုံနှင့် function ကိုပြောင်းလဲမှုများမီးမောင်းထိုးပြလေ့လာမှုများကထောက်ခံနေသည် 2007; Tricomi et al ။ , 2009; Balleine နှင့် O'Doherty, 2010). ဥပမာအားဖြင့်, နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုပြပွဲထိတွေ့ကြွက် dorsomedial striatum ၏ပျက်စီးခြင်းမှတ်သားခြင်းနှင့်ပြောင်းလဲဆုံးဖြတ်ချက်ရလဒ်များကိုသူတို့အားတုံ့ပြန်မှုတနျဘိုးလြော့စေလျှင်ပင်လှုံ့ဆော်မှုဖို့စဉ်ဆက်မပြတ်လေ့တုံ့ပြန်မှုတွေနဲ့ဆက်စပ် dorsolateral striatum ၏တစ်ပြိုင်တည်းပါတိုးပွားနှင့်အတူ PFC medial (Dias-Ferreira et al ။ , 2009). လူသားမြားသညျတှငျ, ဆုလာဘ်-related medial PFC တုံ့ပြန်မှုအတွက်စိတ်ဖိစီးမှု-related လျှော့ချငွေကြေးဆုလာဘ်သို့မဟုတ်ကြားနေရလဒ်များ (Ossewaarde et al ပတျသကျတဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်များတွင်ကြည့်ရှုလေ့လာခဲ့ကြ။ , 2011) စူးရှသောကဖိစီးမှုမှထိတွေ့နေတဲ့မူလတန်းဆုလာဘ်မှ dorsomedial striatal တုံ့ပြန်မှုအတွက်လျှော့ချဆက်စပ်လျက်ရှိသည်စဉ် (ဆိုလိုသည်မှာ, အစားအစာ, မှေးဖှား et al ။ 2009).
လက်ရှိစာပေစူးရှသောစိတ်ဖိစီးမှုဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့တွင်ပါဝင်ပတ်သက်အာရုံကြောစနစ်များ, အထူးသဖြင့် striatum modulate စေခြင်းငှါအကြံပြု, ဒါပေမယ့်လူသားမြားသ၌ဤအယူအဆ၏တိုက်ရိုက်စမ်းသပ်ရသေးဖန်ဆင်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။ လက်ရှိလေ့လာမှု၏ရည်မှန်းချက်ရလဒ်ကိုအကဲဖြတ်အပေါ်စူးရှသောကဖိစီးမှုမှထိတွေ့မှု၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုဆနျးစစျဖို့ခိုင်မာတဲ့ striatal တုံ့ပြန်မှုကျလာသောသိရိုးရှင်းတဲ့ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့ပါရာဒိုင်းအသုံးချဖို့ဖြစ်တယ်။ တစ်ဦးကအစွမ်းထက်အလယ်တန်းစစ်ကူအသုံးပြုခဲ့သည်: ငွေကြေးဆိုင်ရာဆုလာဘ်များနှင့်ပြစ်ဒဏ်များ။ တာဝန်ခန့်မှန်းတဲ့ကဒ်တစ်မူကွဲတစ်ခုကို virtual "ကဒ်" ပေါ်တွင်တစ်ဦးက hidden နံပါတ် (Delgado et al နှင့် ပတ်သက်. ရွေးချယ်စရာစေရန်သင်တန်းသားများကိုတောငျးဆိုပါဝင်ပတ်သက်ရသောအလုပ်ခံခဲ့ရသည်။ , 2000) ။ သင်တန်းသားများကိုမှန်ကန်စွာခန့်မှန်းတဲ့အခါမှာသူတို့တစ်တွေငွေကြေးဆုလာဘ်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ သူတို့မှားယွင်းစွာမှန်းဆသောအခါ, သူတို့တစ်တွေငွေကြေးပြစ်ဒဏ်ရရှိခဲ့သည်။ ထို့အပွငျဆုလာဘ်များနှင့်ပြစ်ဒဏ် (မြင့်မားခြင်းသို့မဟုတ်အနိမ့်) ပြင်းအားအတွက်ကွဲပြား။ အတိတ်သုတေသနအတွက်, ဒီတာဝန်အပေါ်စွမ်းဆောင်ရည် striatal ဒေသများတွင်ကြံ့ခိုင် fMRI သွေးအောက်ဆီဂျင်-Level-မှီခို (BOLD) တုံ့ပြန်မှုကျလာသောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ striatum အတွက်ဆုလာဘ်များနှင့်ပြစ်ဒဏ်အကြားယခင်ကသွင်ပြင်လက္ခဏာ differential ကိုတုန့်ပြန်စူးရှသောကဖိစီးမှုမှထိတွေ့မှုအပြီးလျှော့ချမည်ဖြစ်ကြောင်းတွေးဆ။
သုံးဆယ့်လေးတစ်ဦးချင်းစီအတွက်လေ့လာမှုမှာပါဝင်ခဲ့။ နှစ်ဦးကသင်တန်းသားများကိုကြောင့်တစ်ဦး MRI စက်ကိရိယာများပျက်ကွက်ခြင်းနှင့်ပါဝင်မှုကနေဆုတ်ခွာဖို့တောင်းဆိုချက်တစ်ခုကနေရရှိလာတဲ့အခြားမှနောက်ဆုံးဒေတာကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, တဦးတည်းမှဖယ်ထုတ်လိုက်ခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့်နောက်ဆုံးဒေတာကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ 32 ပါဝင်သူ (16 အမျိုးသမီး, 16 ယောက်ျားအပေါ်ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်; အသက်အရွယ်ကိုဆိုလိုတာ = 23.41 အနှစ် SD ကနှစ်ပေါင်း = 4.07) ။ သင်တန်းသားများကိုလေ့လာမှုဖော်ပြ IRB-အတည်ပြုကြော်ငြာမှတုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ အဆိုပါကြော်ငြာများကိုလည်းလျော်ကြေးတစ်နာရီကို $ 25 တစ်မှုနှုန်းမှာသူတို့ရဲ့အချိန်ကိုကမ်းလှမ်းလိမ့်မည်ဟုညွှန်ပြ။ အားလုံးသင်တန်းသားများကိုနယူးဂျာစီပြည်နယ်နှင့် Rutgers တက္ကသိုလ်ကဆေးပညာနှင့်သွားဘက်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်ရဲ့ Institutional ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းဘုတ်အဖွဲ့၏လမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီအသိပေးသဘောတူညီခကျြကိုပေး၏။
သင်တန်းသားများကိုရေခဲ-ရေအေးတစ်ကွန်တိန်နာသို့တဦးတည်း၏လက်မှနှစ်မြှုပ်ခြင်းကပါဝင်ပတ်သက်ရသောရိုးရာအအေး pressor တာဝန်အပေါ်တစ်မူကွဲသုံးပြီးအကြား-ဘာသာရပ်များဖက်ရှင်အတွက်စူးရှသောစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ထိတွေ့ခဲ့သည်။ ဒါဟာရေ MRI ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အတူမူလကပင်သဟဇာတမဖြစ်ပေမယ့်, ယိုဖိတ်လျှင် (ထိုကဲ့သို့သောဦးခေါင်းကွိုင်ကဲ့သို့) အထိခိုက်မခံ MRI ပစ္စည်းကိရိယာများမှတစ်ဦးကိုခြိမ်းခြောက်နိုင်ပါတယ်သတိပြုပါရန်အရေးကြီးပါသည်။ ထို့အပြင်ပင်ကြောင့်ယိုဖိတ်မှုရေပျက်စီးမှုမရှိခြင်းအတွက်ကြောင့်မြင့်မားပရိုတွန်သိပ်သည်းဆ (Huettel et al မှ MRI signal ကိုနှောင့်ယှက်နိုင်ပါတယ်။ , 2008) ။ လက်ရှိစမ်းသပ်မှုအတွက်ကျနော်တို့ MRI ပတ်ဝန်းကျင် fit မှချမ်း pressor စမ်းသပ်အဆင်ပြေအောင်။ သင်တန်းသားများကို MRI အတွင်းမှာမဟုတ်ဘဲကြိုတင် entry ကိုထက်ထားရှိခဲ့ကြသည်တစ်ချိန်ကလုံခြုံစွာအအေး pressor စိတ်ဖိစီးမှုစီမံခန့်ခွဲရန်, လက်မောင်းထုပ်ပိုးပြီး MRI-သဟဇာတခြောက်သွေ့တဲ့ gelpacs ပေါင်းစပ်ရာမှ created နှင့်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်4ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အပူချိန်မှာထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်။ ဤ "အအေး pressor လက်မောင်းထုပ်ပိုးပြီး"2များအတွက်စူးရှသောကဖိစီးမှုအုပ်စုတာဝန်ပေးအပ်သင်တန်းသားများကို၏လက်ျာတော်နှင့်လက်မောင်းပတ်ပတ်လည်နေရာချခဲ့သည် နှစ်ခုကဒ်ခန့်မှန်းအလုပ်များကိုအသီးအသီးမှချက်ချင်းကြိုတင်မိ။ မစိတ်ဖိစီးမှုအုပ်စုတာဝန်ပေးအပ်သင်တန်းသားများအဘို့, (အခန်းတစ်ခန်း-အပူချိန်မှာ) လက်သုတ်ပုဝါကနေဖန်တီးအလားတူထုပ်ပိုးပြီးတာဝန်ခန့်မှန်းတစ်ခုချင်းစီကိုကဒ်မတိုင်မီအအေး pressor လက်မောင်းထုပ်ပိုးပြီးများထိတွေ့နိုင်သောဆွဘို့အကိုထိန်းချုပ်အသုံးချခဲ့သည်။ နောင်တမလွန်ဘဝ, စုပေါင်းဟူသောဝေါဟာရကို "စမ်းသပ်အုပ်စုများ" ကိုအသုံးပြုပါလိမ့်မည်သည့်အုပ်စုနှစ်စုမှရည်ညွှန်းအောင်အခါ။
တာဝန်ခန့်မှန်း Card ကို
တာဝန်ခန့်မှန်းကဒ်အတွက် (Delgado et al ထံမှအဆင်ပြေအောင်။ , 2000; Delgado et al ။ , 2003) သင်တန်းသားများကိုမေးခွန်းတစ်ခုအမှတ်အသား2များအတွက်ပုံနှိပ်ခဲ့သောအပေါ်သို့ကို virtual "ကဒ်" နဲ့တင်ဆက်ခဲ့ကြ 1 နှင့်9အကြားတစ်ဦးအရေအတွက်ကိုကိုယ်စားပြု s ကို, (ပုံ (Figure1A) .1တစ်ဦးက) ။ သူတို့ရဲ့တာဝန်ရှိသူများ2စဉ်အတွင်းတစ်ခလုတ်ကိုစာနယ်ဇင်းစေခဲ့ သူတို့ကကဒ်ပေါ်မှာအရေအတွက်ကိုအရေအတွက်ကို5(ရွေးချယ်မှုအဆင့်) ထက်မြင့်မားသို့မဟုတ်အောက်ပိုင်းဖြစ်ခဲ့သည်ဟုယုံကြည်ရှိမရှိညွှန်ပြ်။ အဆိုပါ2ကာလအတွင်းသူတို့ရဲ့တုန့်ပြန်အောင်ပြီးနောက် ရွေးချယ်မှုအဆင့့်အမှန်တကယ်အရေအတွက်ကို2များအတွက်ကဒ်ပျေါမှာထငျရှား s ကို (ရလဒ်ကိုအဆင့်) ။ သင်တန်းသားများကိုတစ်မှန်ကန်သောမှန်းဆလုပ်သော အကယ်. သူတို့တစ်တွေငွေကြေးဆုလာဘ်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ သူတို့ရဲ့ခန့်မှန်းမမှန်ကန်ကြောင်းကြီးဘူးဆိုရင်သူတို့တစ်တွေငွေကြေးပြစ်ဒဏ်ရရှိခဲ့သည်။ ဆုလာဘ်များနှင့်ပြစ်ဒဏ် (ဆုလာဘ်: + $ 5.00 သို့မဟုတ် + $ 0.50; ပြစ်ဒဏ်: - $ 2.50 သို့မဟုတ် - $ 0.25) မြင့်မားခြင်းသို့မဟုတ်အနိမ့်ပြင်းအား၏ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အရေးကြီးတာက, တန်ဖိုးများ, အရှင်ဆုလာဘ်နှင့်ဆက်စပ်သော BOLD signal ကိုအတွက်မူကွဲပြစ်ဒဏ် (Tversky နှင့် Kahneman နှင့်အတူဆက်နွယ်သူတို့အားနှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည်သေချာ, လာဘ်ကျော်ငွေကြေးဆုံးရှုံးမှုမှတိုးမြှင့် sensitivity ကို (ဆိုလိုသည်မှာ, အရှုံးခြင်းကိုမနှစ်သက်) အတွက်အကောင့်မှကြိုးကိုင်ခဲ့သည် 2004) ။ အကျိုးကို၏ပြင်းအားတို့ကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်း2စဉ်အတွင်းပေးအပ်ခဲ့သည် s ကိုငါးခုအစိမ်းရောင်စစ်ဆေးမှုများအမှတ် (မြင့်သောပြင်းအား) သို့မဟုတ်ကဒ်ရဲ့ညွှန်အရေအတွက်ကအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောတဦးတည်းအစိမ်းရောင်အမှန်ခြစ်အမှတ်အသား (အနိမ့်ပြင်းအား) ၏တင်ပြချက်ကနေတဆင့်ရလဒ်ကိုအဆင့်။ အလားတူပင်ငွေကြေးပြစ်ဒဏ်များ၏ပြင်းအားအမှတ် (မြင့်သောပြင်းအား) သို့မဟုတ်တစ်ဦးအနီရောင် "×" အမှတ်အသား (အနိမ့်ပြင်းအား) "×" အနီရောင်ငါးကကိုယ်စားပြုခဲ့ပါတယ်။ သင်တန်းသားများကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြိုတင် task ကိုစတင်မှတစ်ခုချင်းစီကိုနှိုးဆွနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာတန်ဖိုးအဖြစ်အကြောင်းကြားခဲ့ပေမယ့်အမှန်တကယ်ဒေါ်လာပမာဏ task ကို (သာစစ်ဆေးမှုများနှင့်×အမှတ်အသားများ) စဉ်အတွင်းတင်ပြမခံခဲ့ရပါ။ တစ်ဦးက Jitter အချင်းချင်းရုံးတင်စစ်ဆေး-ကြားကာလသင်တန်းသားများကို 10 နှင့် 12 အကြားရေရှည်တည်တံ့မယ့် fixation ကြည့်ရှုအားပေးရာစဉ်အတွင်းရလဒ်ကိုအဆင့်နောက်တော်သို့လိုက် လာမယ့်စမ်းသပ်မှုအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက် s ကို။
(က) တာဝန်ခန့်မှန်းကဒ်ပုံဖော်တင်ဆက်ခြင်း။ တစ်မှန်ကန်သောရွေးချယ်မှုအပေါ်ကဥပမာထဲမှာပါလိမ့်မယ်, မှတ်ချက် "ငါးထက်ပိုမိုမြင့်မား။ " (ခ) စမ်းသပ်အချိန်ဇယားနဲ့ Cortisol နမူနာအချိန်ဇယား (ကို C = cortisol နမူနာ) ။
သင်တန်းသားများကိုတာဝန်ခန့်မှန်းကဒ်နှစ်ခုပြေးအတွက်စေ့စပ်နှင့်သူတို့တာဝန်ခန့်မှန်းကဒ်ကာလအတွင်း၎င်းတို့၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူတသမတ်တည်းလျော်ကြေးငွေ (ဆိုလိုသည်မှာယင်းရလဒ်များသူတို့နှင့်အတူတင်ပြခဲ့ကြသည်) ကိုလက်ခံရရှိမယ်လို့အကြောင်းကြားခဲ့ကြသည်။ 40 စုစုပေါင်းပြေးအချိန်နှင့်အတူတစ်ခုချင်းစီကိုပြေးပါဝင်ပတ်သက် 10 စမ်းသပ်မှုတွေ မိ။ သင်တန်းသားများကိုတစ်ခုချင်းစီကိုရုံးတင်စစ်ဆေး၏ရလဒ်တခုဆုလာဘ်များနှင့်ပြစ်ဒဏ်၏ဟန်ချက်ညီတင်ဆက်မှုအဖြစ်မြင့်အနိမ့်ပြင်းအား, ထိန်းသိမ်းထားခဲ့ထိုကဲ့သို့သောကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောခဲ့သတိမထားမိခဲ့သညျ။ ထို့ကြောင့်ပြေး 40 လျင် 20 စမ်းသပ်မှုတွေအသီးအသီး valence အဘို့အမြင့်မားသော / အနိမ့်ပြင်းအား၏ 20, ပြစ်ဒဏ်နှင့်အတူဆုလာဘ်များနှင့် 10 နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါစမ်းသပ်မှုပြီးစီးပြီးနောက်သင်တန်းသားများကိုတာဝန်များ၏အမှန်တကယ်သဘာဝအဖြစ် debriefed ခဲ့ကြသည်။ သူတို့ဟာထို့နောက်ထုပ်ပိုးပြီးသူတို့ကို (ကောင်းမကောင်း) ခံစားရလုပ်ပုံကို post-စမ်းသပ်သူတို့တစ်တွေခုနစျပါးအချက် Likert စကေးပေါ်တွင်လက်မောင်းထုပ်ပိုးပြီးသူနဲ့ဆက်စပ်ပုဂ္ဂလဒိဋ္စိတ်ဖိစီးမှုအဆင့်ဆင့် rated ဘယ်မှာမေးခွန်းလွှာအဖြစ်ပြီးစီးခဲ့သည်။
တံထွေး cortisol တိုင်းတာ
သင်တန်းသားများကို (ရေထက်အခြားဘာမှမ) သောက်သုံးခြင်း, အစာစားခြင်းမှရှောင်ရှားရန်ညွှန်ကြားထား, ဒါမှမဟုတ်2များအတွက်ဆေးလိပ်ခဲ့ကြသည် တံတွေးနမူနာ untainted ဖြစ်ကြောင်းသေချာစေရန်ကြိုတင်စမ်းသပ်မှု၏အစမှဇ။ တံထွေး cortisol data တွေကိုဆည်းပူးဖို့, သင်တန်းသားများနှင့်ပတ်သက်ပြီး 1 များအတွက်သူတို့၏ခံတွင်းထဲမှာ Salimetrics ခံတွင်း swab (အရေးပေါ်) ငယ်ဖို့တောင်းခဲ့သည် မိမိတို့လျှာအောက်ရှိအရေးပေါ်အားမရသဖြင့် min ။ ဒီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းပြီးစီးပေါ်၌ဘာသာရပ်အတွက်အရေးပေါ်နုတ်ထွက်နှင့်စမ်းသပ်ချက်ချင်းတစ်ဦးချင်း centrifugal ပြွန်ထဲမှာတင်လိုက်တယ်။ သုံးနမူနာခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်အတွင်းစကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့ session ကိုတစ်လျှောက်လုံးဤလက်ဆွဲတစ်ဦးချင်းစီပါဝင်သူများအတွက်ဝယ်ယူခဲ့ကြသည် 15 ခန္ဓာဗေဒ MRI Scan ဖတ် (ကြိုတင်တာဝန်ခန့်မှန်းပထမဦးဆုံးကဒ်) ပြီးစီးပြီးနောက်ခေါ်ဆောင်သွားပထမဦးဆုံးနမူနာအတူမိကြားကာလ။ နမူနာနှစ်ခုကိုသုံးယောက်တာဝန်ခန့်မှန်းကဒ်၏နှစ်ခုလုပ်ကွက်တစ်ခုချင်းစီပြီးနောက်ဝယ်ယူခဲ့ကြသည်။ နမူနာခြောက်သွေ့တဲ့ရေခဲတွေနဲ့ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်ထပ်ထဲကဓာတုပစ်စညျး assay ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများအတွက် Salimetrics ဓာတ်ခွဲခန်း (ပြည်နယ်ကောလိပ်, PA, USA) မှစေလွှတ် -10 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာအအေးသိုလှောင်မှုအတွက်အေးခဲခဲ့ကြသည်။ တစ်ဦးစမ်းသပ်အချိန်ဇယားနဲ့ Cortisol နမူနာအချိန်ဇယားကိုပုံထဲမှာတင်ပြထားပါသည် Figure1B.1ခဤအချက်အလက်တစ်ရပ်သီးခြားသတ်မှတ်ထားအဖြစ်အသုံးပြုမခံခဲ့ရသော်လည်းအရေးကြီးသောအချက်မှာအမျိုးသမီးပါဝင်သူ (cortisol ပမာဏသြဇာလွှမ်းမိုးစေခြင်းငှါပါးစပ် contraceptives (OC) ၏အသုံးပြုမှုအတွက်ပြခဲ့ကြ se နှုန်း) ။ အဆိုပါ5အမျိုးသမီးသင်တန်းသားများ၏ 16 OC ၏အစီရင်ခံစာအသုံးပြုမှုကိုပြုလေ၏ပေမယ့်အကြိမ်ကြိမ်-အစီအမံ ANOVA ဖြင့်တိုင်းတာသည်အတိုင်း, cortisol ပမာဏမျှသိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှု OC နှင့် Non-OC သင်တန်းသားများအကြားလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ သူတို့အားငါးခုသင်တန်းသားများပုံရိပ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှဖယ်ထုတ်လိုက်သောအခါထို့အပြင်အားလုံးအစီရင်ခံသက်ရောက်မှု၏အရေးပါမှုနှင့် directionality မပြောင်းလဲရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
imaging echoplanar ပုံရိပ်တစ်ခုအစာရှောင်ခြင်း gradient ကိုစနစ်တပ်ဆင်ထားတဲ့ 3T Siemens Allegra ကင်နာအပေါ်ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ ရေမြှုပ် padding ကိုအတူတစ်ဦးစံ radiofrequency ခေါင်းကိုကွိုင်အဆင်မပြေသေးအဖွဲအနေဖြင့်သင်တန်းသားများကို '' ဦးခေါင်းလှုပ်ရှားမှုကိုကန့်သတ်ဖို့အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ high-resolution axial ပုံရိပ်တွေ (T1 မာန်တင်း MPRAGE: 256 × 256 matrix, FOV = 256 မီလီမီတာ, 176 1 မီလီမီတာ axial ချပ်) အားလုံးဘာသာရပ်များမှရရှိသောခဲ့ကြသည်။ functional ပုံရိပ်တွေ (Single-shot gradient ကိုပဲ့တင်သံ EPI sequence ကို; TR = 2000 ဒေါ်; TE = 25 ဒေါ်; FOV = 192 စင်တီမီတာ; လှန်ထောင့် = 80 °; matrix = 64 × 64; အချပ်ထူ =3မီလီမီတာ) တာဝန်ပြေးခန့်မှန်းနှစ်ခုကဒ်ပေါ်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုကာလအတွင်းဝယ်ယူခဲ့ကြသည်။ ဒေတာများပြီးတော့ BrainVoyager QX software ကို (ဗားရှင်း 2.2, ဦးနှောက်ဆန်းသစ်တီထွင်မှု, Maastricht, နယ်သာလန်) ကို အသုံးပြု. preprocessed နှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့ကြသည်။ Talairach stereotaxic အာကာသမှပါဝင်ပတ်သက်ရွေ့လျားမှုဆုံးမခြင်း (ခြောက် parameter သည်သုံးရှုထောင်), Spatial တင်ပါသည် (4-မီလီမီတာ FWHM), voxel ပညာရှိ linear detrending, High-pass တကြိမ်နှုန်း၏ filtering ကို (အချိန်သင်တန်းနှုန်းသုံးခုသံသရာ) နှင့်ပုံမှန် Preprocessing (Talairach နှင့် Tournoux, 1988).
အထွေထွေ linear မော်ဒယ်များ (GLM) ခန့်မှန်းဦးနှောက်အတွင်း BOLD အပြောင်းအလဲများကို၏မှီခို variable ကိုပေါ်သို့ regressed ခဲ့ပြီးသောအတွက် Single-ဘာသာရပ်အဆင့်မှာသတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်။ နှစ်ဦးကိုသီးခြားမော်ဒယ်များထုတ်ပေးခဲ့ကြသည်။ မော်ဒယ် 1 (သာရလဒ်ကို valence) ခုနှစ်တွင်နှစ်ခုခန့်မှန်းသင်တန်းသားများကိုသူတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုအပြီးအကြိုးရလဒျ (ပိုက်ဆံအမြတ်) သို့မဟုတ်ဒဏ်ခတ်ရလဒ်ကို (ပိုက်ဆံဆုံးရှုံး) ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်ရှိမရှိအပေါ်အခြေခံပြီးကဒ်ခန့်မှန်းတာဝန်များ၏ရလဒ်ကိုအဆင့်လုပ်ပါတယ်။ မြင့်မားသောပြင်းအားဆုလာဘ်နိမ့်ပြင်းအားဆုလာဘ်မြင့်မားပြင်းအားပြစ်ဒဏ်နှင့်အနိမ့်ပြင်းအားပြစ်ဒဏ်: မော်ဒယ်2(ရလဒ်ကို valence နှင့်ရလဒ်ကိုပြင်းအား) များအတွက်ဆုလာဘ်များနှင့်ပြစ်ဒဏ်များ၏ပြင်းအားလေးခန့်မှန်းပါဝင်တဲ့မော်ဒယ်အတွက်ရရှိလာတဲ့, ပါဝင်သည်ခဲ့ကြသည်။ တစ်ဦးလွဲချော်-ရုံးတင်စစ်ဆေးခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်အဖြစ်နှစ်ဦးစလုံးမော်ဒယ်များခုနှစ်, fMRI ဒေတာ preprocessing ကာလအတွင်းထုတ်ပေးရွေ့လျားမှု parameters တွေကို, (ဦးခေါင်းလှုပ်ရှားမှုကိုအဘို့ကိုထိန်းချုပ်ရန်) မျှ-အကျိုးစီးပွား covariates အဖြစ်ထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်။ နှစ်ဦးကိုဒုတိယအဆင့်ကျပန်းသက်ရောက်မှု GLMs ထို့နောက်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။
မြေတပြင်လုံး-ဦးနှောက်စာရင်းအင်း parametric မြေပုံထုတ်ပေးခဲ့ကျပန်းသက်ရောက်မှု GLMs အပေါ်အခြေခံပါတယ်။ ပေးထား တစ်ဦး အတိတ်အလုပ်အတွက်အလားတူထူးခွားသညျ့ဖွငျ့သတ်မှတ် BOLD signal ကို၏ပုံစံများ (ပြန်လည်သုံးသပ်ဘို့, Delgado တွေ့မြင်, 2007အပြစ်ဒဏ်ဆနျ့ကငျြဘဆုလာဘ်-ဆက်စပ်သတင်းအချက်အလက် processing တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခံရဖို့လူသိများဦးနှောက်ဒေသများတွင် BOLD signal ကိုအတွက်လိုအကောင်းဆုံးမီးမောင်းထိုးပြတာဝန်-related ပွောငျးလဲ -) ကဆုကြေးထင်ခဲ့သည်။ မော်ဒယ် 1 (သာရလဒ်ကို valence) ကိုသုံးပြီးတစ်ဖွဲ့လုံး-ဦးနှောက်နှစ်ခု-Tails ဆနျ့ကငျြဘ BOLD ရလဒ်ကိုအဆင့်အပေါ်ဖျော်ဖြေခဲ့သည်ဆုပေးသောနှင့်ပြစ်ဒဏ် (ဆုကြေး - အပြစ်ဒဏ်) ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်, ဤဆနျ့ကငျြဘနှင့်ဆက်စပ် BOLD အတွက်ကွာခြားချက် between- တလျှောက်နှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည် စမ်းသပ်အုပ်စုတစ်စု၏လကျအောကျခံအချက် (ထူးခြားသောစိတ်ဖိစီးမှု vs. အဘယ်သူမျှမစိတ်ဖိစီးမှု) ။ ထို့ကြောင့်ဤခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသိသိသာသာစမ်းသပ်အုပ်စုများအကြားကွဲပြားကြောင်းရလဒ်ကို valence မှတုံ့ပြန်မှုဦးနှောက်ဒေသများမီးမောင်းထိုးပြ။ မော်ဒယ်2သုံးပြီးအလားတူတပြင်လုံးကို-ဦးနှောက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများတွင်ရလဒ် valence ဖြတ်ပြီးအမြင့်ဆုံးနှင့်အနိမ့ပြင်းအားရလဒ်များတစ်ဆနျ့ကငျြဘဖျော်ဖြေခဲ့သည် ([အမြင့်ဆုကြေး + မြင့်မားသောအပြစ်ဒဏ်] - [အနိမျ့ဆုကြေး + အနိမျ့အပြစ်ဒဏ်]) နှင့်ဤဆနျ့ကငျြဘနှင့်ဆက်စပ် BOLD အတွက်ခြားနားချက်စမ်းသပ်အုပ်စုတစ်စု၏အကြား-ဘာသာရပ်များအချက် (ထူးခြားသောစိတ်ဖိစီးမှု vs. အဘယ်သူမျှမစိတ်ဖိစီးမှု) တစ်လျှောက်တွင်တွက်ချက်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ဤခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသိသိသာသာစမ်းသပ်အုပ်စုများအကြားကွဲပြားကြောင်းငွေကြေးဆိုင်ရာရလဒ်များ၏ပြင်းအားမှတုံ့ပြန်မှုဦးနှောက်ဒေသများဆန်းစစ်ခဲ့သည်။
ရလဒ်ဆနျ့ကငျြဘမြေပုံထို့နောက်တစ်ခုံမှာ activation ၏စာရင်းအင်းသိသိသာသာပြွတ်ကိုသိရှိနိုင်ဖို့လေ့လာခဲ့ကြ p < 0.005 တစ်တဆက်တည်းတံခါးခုံနှင့်အတူ 5,3 မီလီမီတာ voxels ။ မျိုးစုံနှိုင်းယှဉ်မှုအတွက်ဆုံးမခြင်းစပျစ်သီးပြွတ်-size ကိုခုံ (Forman et al ၏အသုံးပြုမှုမှတဆင့်မှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ , 1995; Goebel et al ။ , 2006) ။ ထို့ကြောင့်တစ်ဦးလုံလောက်သောအတိုင်းအတာသာပြွတ်αတစ်စပျစ်သီးပြွတ်-Level မှားယွင်းသော-အပြုသဘောဆောင်မှုနှုန်းနှင့်ဆက်စပ်ခံရဖို့သကဲ့သို့ = 0.05 ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းတွင်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်တက်ရောက်လာသူများကို '' လိင်ရဲ့ဖြစ်နိုင်ချေအခန်းကဏ္ဍတစ်ခုရှာဖွေတူးဖော်ခွင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအတွက်ဖျော်ဖြေခဲ့သည် တစ်ဦး အကျိုးစီးပွားဒေသများစာပေ (ဥပမာ Lighthall et al အတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာယခင်လိင်-related ဆိုးကျိုးများပေးထားသော။ , 2011) ။ အထူးသ parameter သည်ခန့်မှန်းခြေနှစ်ဦးစလုံးထူးခွားသညျ့အနေဖြင့်သိသာထင်ရှားသောပြွတ်ထွက်ပေါ်လာတဲ့ထံမှထုတ်ယူနှင့်လိင်နှင့်အတူအလားအလာ interaction ကအတှကျလေ့လာခဲ့ကြသည်။ အရေးကြီးတာက, ရှိသမျှ post ကို hoc ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း၏တစ်ဦးချင်းစီမိသားစုအတွင်းစမ်းသပ်မှုများ sequential Bonferroni ဆုံးမခြင်း (Holmes ကနေတဆင့်မျိုးစုံနှိုင်းယှဉ်ဘို့အတညျ့ခဲ့ကြသည်, 1979).
တစ်ဦးကလွတ်လပ်သော Two-tailed t-test စမ်းသပ်အုပ်စုများအကြားတာဝန်ခန့်မှန်းကဒ်အတွက်တုံ့ပြန်မှုအချိန်အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုဆနျးစစျဖို့ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ အဘယ်သူမျှမသိသိသာသာခြားနားချက်ကို (စူးရှသောကဖိစီးမှုအဘို့တုံ့ပြန်မှုကာလ၌လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်M = 623.31, SEM = အဘယ်သူမျှမစိတ်ဖိစီးမှု vs. 45.91) (M = 633.77, SEM = 43.81) အဖွဲ့များ t(30) = 0.17, p > 0.15,d= 0.06 ။
ရိပ်မိစိတ်ဖိစီးမှုအတွေ့အကြုံ၏ post-စမ်းသပ်ပုဂ္ဂလဒိဋ္ ratings လွတ်လပ်သောမှတဆင့်စူးရှသောကဖိစီးမှုနှင့်မျှမတို့စိတ်ဖိစီးမှုစမ်းသပ်အုပ်စုများအကြားလေ့လာခဲ့ကြသည် t-tests ။ ဤအအေး pressor လက်မောင်းထုပ်ပိုးပြီးသင်တန်းသားများကိုအတွေ့အကြုံခဲ့ (မကောင်းတဲ့ကောင်း) ခံစားရနှင့်မည်သို့စိတ်ဖိစီးမှု (မြင့်မားသောအနိမ့်မှ) လုပ်မည်သို့ ratings ပါဝင်သည်။ မစိတ်ဖိစီးမှုအုပ်စုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက, စူးရှသောကဖိစီးမှုအုပ်စုတစ်စု [သိသိသာသာဆိုးရွားခံစားအဖြစ်လက်ရုံးကိုထုပ်ပိုးပြီး ratedt(30) = 4.42, p < 0.001,d= 1.56] နှင့်ပိုပြီးစိတ်ဖိစီးမှု [t(30) = 3.46, p < 0.01d= 1.22] ။
တံထွေး cortisol ဒေတာ
တံထွေး cortisol ဒေတာကြောင့် MRI စကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့စဉ်အတွင်းနမူနာဆည်းပူးဖို့နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းကြောင့်နမူနာတစ်ခုအကျင့်ပျက်ခြစားမှုနှင့်နှစ်ခုကိုကိစ္စများတွင်တဦးတည်းအမှု၌, သုံးသင်တန်းသားများအဘို့ဖယ်ထုတ်ထားခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် cortisol ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းဟာ 29 သင်တန်းသားများ၏ 33 (13 မျှစိတ်ဖိစီးမှု, 16 စူးရှသောကဖိစီးမှု) ရက်နေ့တွင်ကျင်းပပြီးစီးခဲ့သညျ။ စမ်းသပ်အုပ်စုသုံးခုစလုံးနမူနာများအတွက် (nmol / L ကိုအတွက်) တံထွေး cortisol ပမာဏဆိုလိုစားပွဲတင်အစီရင်ခံကြသည် Table1.1။ တစ်ဦးက3(နမူနာ 1, 2, ဒါမှမဟုတ် 3) ×2(စမ်းသပ် Group မှ: စိတ်ဖိစီးမှု vs. အဘယ်သူမျှမစိတ်ဖိစီးမှု) ထပ်ခါတလဲလဲ-အစီအမံ ANOVA ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်, ဒါပေမယ့်နမူနာများနှင့်စမ်းသပ်ဆဲအုပ်စုတစ်စုအကြားမပါသိသိသာသာအပြန်အလှန်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်, F(2, 54) = 1.77, p = 0.18, η2p= 0.061 ။ တိုးမြှင့်ဖို့လေးစားမှုနှင့်အတူကွေးအောက်မှာဧရိယာ (AUCI) နှစ်ဦးစလုံးစမ်းသပ်အုပ်စုများများအတွက် trapezoidal နည်းလမ်းကို အသုံးပြု. တွက်ချက်ခဲ့သည်။ ကတံထွေး cortisol ပမာဏအတွက်နှစ်ဦးစလုံးအချိန်-related အပြောင်းအလဲများကိုကိုယ်စားပြုအဖြစ်၏ခြုံငုံပြင်းထန်မှုအပြောင်းအလဲများကို (Pruessner et al ပြောခဲ့၌ဤအတိုင်းအတာအသုံးဝင်သည်။ , 2003) ။ တစ်ဦးကတစ်ဦး-tailed လွတ်လပ်သော tAUC အကြား -testI စမ်းသပ်အုပ်စုများ (ထူးခြားသောစိတ်ဖိစီးမှု vs. အဘယ်သူမျှမစိတ်ဖိစီးမှုကို) အတွက်စူးရှသောစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ထိတွေ့ခဲ့ကြတဲ့သူတွေကိုသင်တန်းသားများအဘို့အ cortisol ပမာဏအတွက်သိသိသာသာတိုးညွှန်ပြ, t(27) = 1.78, p < 0.05,d= 0.69 (ပုံ (Figure2) .2) ။ အဘယ်သူမျှမသိသိသာသာဆက်စပ်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောတင်ပြ cortisol နှင့်ပုံရိပ်ဒေတာများအကြားလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။
ဆိုလို (အခြေခံမှာ 1 run တာဝန်ပြီးမှ, အလုပ်တခုကိုပြေး2ပြီးနောက်စမ်းသပ်အုပ်စု nmol / L ကိုအတွက်တံထွေး cortisol ပမာဏဆိုလို ± SEM).
တိုးမြှင့်ဖို့လေးစားမှုနှင့်အတူကွေးအောက်မှာ cortisol ဧရိယာ Salivary (AUCI) စမ်းသပ်အုပ်စု။ မှတ်ချက်, အနှုတ်လက္ခဏာ AUCI (ထိုစမ်းသပ်မှု၏သင်တန်းကျော်တံထွေး cortisol အတွက်ကျဆင်းခြင်းကိုညွှန်း) တန်ဖိုးများကိုတစ်ဦး "ကျဆင်းခြင်း၏အညွှန်းကိန်း" အဖြစ်ထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည် ...
ရလဒ်ကို valence: ဆုလာဘ် - စမ်းသပ်အုပ်စုသည်ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်ပြစ်ဒဏ်
မစိတ်ဖိစီးမှုအုပ်စု, မျိုးစုံဦးနှောက်ဒေသများအကျိုးကိုနှင့်ဆက်စပ် သာ. ကြီးမြတ် BOLD signal ကိုသရုပ်ပြ - လူတန်းစားစိတ်ဖိစီးမှုအုပ်စုတွင်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်ထက်ပြစ်ဒဏ်ဆနျ့ကငျြဘ (ဇယားကိုကြည့်ပါ Table2) .2) ။ အဲဒါကတော့သည်ဤဒေသများအကြား featuring အဆိုပါ dorsal striatum (အထူးသလက်ျာ caudate နျူကလိယနှင့် left putamen) နှင့်လက်ဝဲ OFC ခဲ့ကြသည်။
ဆုကြေးအဘို့စမ်းသပ်အုပ်စုသည် (ထူးခြားသောစိတ်ဖိစီးမှု vs. အဘယ်သူမျှမစိတ်ဖိစီးမှု) ကကွဲပြားခြားနားမှုသရုပ်ပြကြောင့်ဦးနှောက်ဒေသများ - အပြစ်ဒဏ်နှင့်အမြင့် - အနိမျ့ပြင်းအားထူးခွားသညျ့ (p < တညျ့ 0.005,).
လက်ျာ caudate ခုနှစ်, post ကို hoc တွဲ t-tests မစိတ်ဖိစီးမှုအုပ်စု BOLD signal ကိုပြစ်ဒဏ်ထက်ဆုလာဘ်ဘို့သိသိသာသာကြီးကြောင်းအကြံပြု, t(15) = 5.69, p < 0.001,d= 0.88 (ကိန်းဂဏန်းများ (Figures3A-C) .3A-C ကို) ။ အဘယ်သူမျှမသိသိသာသာကွာခြားချက်စူးရှသောကဖိစီးမှုအုပ်စုတွင်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ပါသည်, t(15) = 0.74, p > 0.15,d= 0.08 ။ BOLD signal ကိုတစ်အလားတူပုံစံ [လက်ဝဲ putamen မရှိစိတ်ဖိစီးမှုလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်, t(15) = 6.57, p < 0.001,d= 0.73; စူးရှသောကဖိစီးမှု, t(15) = 1.24, p > 0.15,d= 0.18] နှင့် [မျှစိတ်ဖိစီးမှု OFC ယောက်ကျန်ကြွင်း, t(15) = 6.80, p < 0.001,d= 1.15; စူးရှသောကဖိစီးမှု, t(15) = 0.37, p > 0.15,d= 0.06; ပုံကိုကြည့်ပါ Figure4] .4] ။ မစိတ်ဖိစီးမှုအုပ်စုတစ်စုကဤဒေသများတွင်ပြစ်ဒဏ်ကျော်ဆုလာဘ်တစ်ခုရှင်းရှင်းလင်းလင်းတုံ့ပြန်မှုသရုပ်ပြသော်လည်းထို့ကြောင့်စူးရှသောစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ထိတွေ့ခဲ့သောအုပ်စုတစ်စုဆုချ-ဆက်စပ်ဖို့သတင်းအချက်အလက်တုန့်ပြန်နေတဲ့မရှိခြင်းပြ။ အားလုံးသိသာထင်ရှားသော t-tests sequential Bonferroni ဆုံးမခြင်းအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။
(က) စူးရှသောစိတ်ဖိစီးမှုသင်တန်းသားများကိုကျော်မျှစိတ်ဖိစီးမှုဘို့ သာ. ကြီးမြတ် BOLD signal ကိုပြညာဘက် caudate နှင့်လက်ဝဲ putamen ပြွတ်။ (ခ) ညာဘက် caudate နျူကလိယရလဒ်ကို valence × စမ်းသပ်အုပ်စုတစ်စု parameter သည်ခန့်မှန်းချက်။ (C) Left putamen ရလဒ်ကို ...
(က) စူးရှသောစိတ်ဖိစီးမှုသင်တန်းသားများကိုကျော်မျှစိတ်ဖိစီးမှုဘို့ သာ. ကြီးမြတ် BOLD signal ကိုပြ orbitofrontal cortex စပျစ်သီးပြွတ်ထားခဲ့တယ်။ (ခ) Left orbitofrontal cortex ရလဒ်ကို valence × စမ်းသပ်အုပ်စုတစ်စု parameter သည်ခန့်မှန်းချက်။
လူတန်းစားစိတ်ဖိစီးမှုအုပ်စုတွင်ဤသုံးပါးဒေသများများအတွက် parameter ခန့်မှန်းပြီးတော့ဆုလာဘ်များနှင့်ပြစ်ဒဏ်စမ်းသပ်မှုများတွင်ပြင်းအား-related သက်ရောက်မှု၏ရှေ့မှောက်တွင် (မူရင်းမတူဘဲမပါဝင်တစ်ခု orthogonal အချက်) ကိုတစ်စက္ကန့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအတွက်လေ့လာခဲ့ကြသည်။ လက်ျာ caudate ခုနှစ်, post ကို hoc တွဲ t-tests လူတန်းစားစိတ်ဖိစီးမှုအုပ်စု BOLD signal ကိုမြင့်မားသောပြင်းအား၏ရလဒ်များအဘို့အပြစ်ဒဏ်များကိုကျော်ဆုလာဘ်ဘို့သိသိသာသာကြီးကြောင်းအကြံပြု, t(15) = 2.79, p < 0.05,d= 0.31, ဒါပေမယ့်မရနိမ့်ပြင်းအား, t(15) = -1.37, p > 0.15,d= -0.25 ။ အလားတူပုံစံလက်ဝဲ putamen အတွင်းကြည့်ရှုလေ့လာခဲ့သည်။ မြင့်မားသောပြင်းအားရလဒ်များအကြားထူးခြား BOLD acute စိတ်ဖိစီးမှုအုပ်စု, t(15) = 2.84, p < 0.05,d= 0.43, ဒါပေမယ့်မရနိမ့်ပြင်းအားရလဒ်များ, t(15) = -0.83, p > 0.15,d= -0.20 ။ အထူးသသည်စူးရှသောကဖိစီးမှုအုပ်စုတွင်အထက်ပါဒေသများတွင်လက်ဝဲ OFC မှမတူဘဲသိသိသာသာမြင့်မားတဲ့ [ဖြစ်စေပြင်းအား၏ရလဒ်များအကြားခွဲခြားမရ: t(15) = 1.25, p > 0.15,d= 0.27; အနိမ့်: t(15) = -1.71, p > 0.10,d= -0.34] ။ အားလုံးသိသာထင်ရှားသော t-tests sequential Bonferroni ဆုံးမခြင်းအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။
နှစ်ခုတာဝန်ပြေးအကြားကွာခြားချက်ဟာစိတ်ဖိစီးမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက်ပစ္စုပ္ပန်ခဲ့သည်ဖြစ်စေမဆနျးစစျဖို့, စိတ်ဝင်စားမှုတစ်ဒေသ (Roi) ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ ROIs သုံးပြီး (ညာဘက် dorsal striatum စုံစမ်းစစ်ဆေးဖျော်ဖြေ putamen left နှင့်ပြေး 1 နှင့်2အကြား OFC BOLD signal ကို left ခဲ့သည် ) မူလမြေတပြင်လုံး-ဦးနှောက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှ။ သုံးယောက်ဖျောပွ ROIs ထံမှထုတ်ယူ parameter ခန့်မှန်းချက်2(Run ကို 1 vs. Run ကို2Run ကို) ကနေတဆင့်လေ့လာခဲ့ကြ ×2(ရလဒ် valence: အပြစ်ဒဏ် vs. ဆုကြေး) ×2(စမ်းသပ် Group မှ: အဘယ်သူမျှမထူးခြားသောစိတ်ဖိစီးမှု vs. စိတ်ဖိစီးမှု) BOLD တစ်ဦးခြားနားချက်ပြေးတစ်ဦး function ကိုအဖြစ်တည်ရှိဖြစ်စေမတည်ထောင်၏ရည်ရွယ်ချက်ထပ်ခါတလဲလဲ-အစီအမံ ANOVA ။ အဘယ်သူမျှမသိသိသာသာအပြန်အလှန်လက်ျာ dorsal striatum အတွက်ပြေး, စမ်းသပ်အုပ်စုနှင့်ရလဒ်ကို valence အကြားလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်, F(1, 30) = 0.001, p > 0.15, η2p= putamen left 0.000, F(1, 30) = 0.77, p > 0.15, η2p= 0.025, ဒါမှမဟုတ်လက်ဝဲ OFC, F(1, 30) = 0.31, p > 0.15, η2p= 0.010, ယခင်ကဆွေးနွေးတင်ပြသက်ရောက်မှုပြေးအကြားကွဲပြားခြားနားသောမကြောင်းအကြံပြု။
ရလဒ်ကိုပြင်းအား: မြင့်သော - အနိမ့်စမ်းသပ်အုပ်စုတစ်စုထူးခွားသညျ့ဖွငျ့
ဘယ်ဘက်ယုတ်ညံ့တိုကျရိုကျ gyrus (BA45): တစ်ဦးကတစ်ခုတည်းဦးနှောက်ဒေသရလဒ်ကိုပြင်းအားမတူဘဲမျှစိတ်ဖိစီးမှုသင်တန်းသားများကိုတိုးပွားလာ BOLD signal ကိုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ post ကို hoc တွဲ t-tests မျှစိတ်ဖိစီးမှုပါဝင်သူ (ရလဒ်ကို valence ကိုဖြတ်ပြီး) အနိမ့်ပြင်းအားရလဒ်များကျော်မြင့်သောပိုမို BOLD တုံ့ပြန်မှုပြညွှန်ပြ, t(15) = 4.77, p < 0.001,d= 0.76 ။ acute စိတ်ဖိစီးမှုသင်တန်းသားများသို့သော်ပြောင်းပြန်ပုံစံဆီသို့ (Bonferroni-Holmes ဆုံးမခြင်းရှင်သန်ဘူးသော) တစ်ဦးလမ်းကြောင်းသစ်သရုပ်ပြ - မွငျ့မားပြင်းအားရလဒ်များအပေါ်အနိမ့်အဘို့ BOLD တိုးတက် t(15) = -1.98, p < 0.10,d= -0.38 ။
တံထွေး cortisol AUCI စမ်းသပ်အုပ်စု cortisol တိုးအတွက်လိင်-related ကွဲပြားမှုများအတွက် univariate ANOVA ကနေတဆင့်လေ့လာခဲ့ပါတယ်။ တံထွေး cortisol အပေါ်လိင်၏အဘယ်သူမျှမအရေးပါသောအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုရှုလေ့လာခဲ့သည်, F(1, 25) = 0.52, p = 0.48, η2p= 0.020, မရှုလေ့လာစမ်းသပ်အုပ်စုတစ်စုအပြန်အလှန်အားဖြင့်သိသိသာသာလိင်ခဲ့ F(1, 25) = 0.03, p = 0.87, η2p= 0.001 ။ (အပြစ်ဒဏ် vs. ၌ဆပ်ရလဒ် valence) နှစ်ဦးစလုံးထူးခွားသညျ့အတွက်သိသာထင်ရှားသောပြွတ်ထံမှထုတ်ယူ parameter ခန့်မှန်းချက်2တစ်စီးရီးအကြောင်းမဲ့ခဲ့ကြသည် ×2(စမ်းသပ် Group မှ: ထူးခြားသောစိတ်ဖိစီးမှု vs. အဘယ်သူမျှမစိတ်ဖိစီးမှု) ×2(လိင်: အထီးအမျိုးသမီး vs. ) ထပ်ခါတလဲလဲ-အစီအမံ ANOVAs ဆုလာဘ်-ဆက်စပ်သတင်းအချက်အလက်အပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်စိတ်ဖိစီးမှု-related ကွဲပြားခြားနားမှုအတွက်လိင်၏ဖွဖြစ်နိုင်သောအခန်းကဏ္ဍစူးစမ်းရန်။ လက်ျာ caudate အတွက်သိသာထင်ရှားသောစမ်းသပ်အုပ်စုတစ်စုကိုဦးတည်နေတဲ့လမ်းကြောင်း × လိင်အပြန်အလှန်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်, F(1, 28) = 3.27, p < 0.10, η2p= 0.105 ။ post ကို hoc လွတ်လပ်သော t-tests မျှစိတ်ဖိစီးမှုအုပ်စုတစ်စုအမျိုးသမီးသင်တန်းသားများကိုအထီးကိုပြု၏ထက်အားလုံးရလဒ်များအဘို့အခြုံငုံ သာ. ကြီးမြတ် BOLD signal ကိုပြသကြောင်းညွှန်ပြ, t(14) = -2.57, p < 0.05,d= -1.28 ။ ၎င်းတို့စပ်ကြား non-သိသာထင်ရှားသောခြားနားချက်အတွက်ရရှိလာတဲ့, လျှော့ချခဲ့သည်မတူဘဲစူးရှသောကဖိစီးမှုအုပ်စုသည်ယောက်ျား '' အမျိုးသမီးသော်လည်း BOLD မစိတ်ဖိစီးမှုအုပ်စုနှိုင်းယှဉ်ပါကခြီးမွှောကျခဲ့သညျ ', t(14) = 0.44, p > 0.15,d= 0.22 ။ အဘယ်သူမျှမကအခြားဦးနှောက်ဒေသများပြရေပန်းစားသို့မဟုတ်သိသာထင်ရှားသောလိင်ဆိုးကျိုးများ။
ဒီလေ့လာမှုမှာကျနော်တို့စူးရှသောကဖိစီးမှုမှထိတွေ့မှုငွေကြေးဆုလာဘ်များနှင့်ပြစ်ဒဏ်များမှအာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုသြဇာလွှမ်းမိုးမှုဘယ်လောက်စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ငှါရှာကြံလေ၏။ ကျနော်တို့အကြား-ဘာသာရပ်များတစ်ဦးချဉ်းကပ်နည်းကိုသုံးကာထိန်းချုပ်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်း (မျှစိတ်ဖိစီးမှုအုပ်စုသည်) ကိုနှိုင်းယှဉ်တစ်ဦးချမ်းအေး pressor လုပ်ထုံးလုပ်နည်း (စူးရှသောကဖိစီးမှုအုပ်စုသည်) ၏လျှောက်လွှာအပြီးသင်တန်းသားများ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးယခင်ကကြံ့ခိုင် striatal လိုက်လျောတွေ့ရှိရိုးရှင်းတဲ့ကဒ်ခန့်မှန်းပါရာဒိုင်းနှစ်ခုပြေးနေစဉ်အတွင်း တုံ့ပြန်မှု (ဥပမာ Delgado et al ဆုချမှ activation ။ , 2000) ။ တံထွေး cortisol အချက်အလက်များနှင့်ပုဂ္ဂလဒိဋ္စိတ်ဖိစီးမှုနှုန်းဖိအား (fMRI များအတွက်အဆင်ပြေအောင်ဆိုလိုသည်မှာအအေး pressor လက်မောင်းထုပ်ပိုးပြီး) ထိရောက်သောခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။ စူးရှသောစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ထိတွေ့သင်တန်းသားများကိုငွေကြေးဆုလာဘ်များနှင့်ပြစ်ဒဏ်များမှအာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုအတွက်သိသိသာသာအပြောင်းအလဲတချို့ပြ။ လက်ျာ caudate နျူကလိယနှင့်လက်ဝဲ putamen အတွင်း dorsal striatal BOLD signal ကိုအဘယ်သူမျှမစိတ်ဖိစီးမှုသင်တန်းသားများအတွက်အကြိုးနှင့်ပြစ်ဒဏ်ရလဒ်များအကြားမတူညီသော်လည်း, ဒီစူးရှသောစိတ်ဖိစီးမှုသင်တန်းသားများအတွက်အမှုမရဖြစ်ခဲ့သည်။ လှုပ်ရှားမှုတစ်ဦးကအလားတူပုံစံလက်ဝဲ OFC အတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အထူးသမြင့်မားပြင်းအားဆုလာဘ်များနှင့်ပြစ်ဒဏ် OFC အတွင်း striatal ဒေသများသော်လည်းမအတွက်စိတ်ဖိစီးမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုမှဒဏ်ခံခဲ့ကြသည်။ အတူတူခေါ်ဆောင်သွားအဲဒီရလဒ်တွေကိုစူးရှသောကဖိစီးမှုမှထိတွေ့မှုကတော့ dorsal striatum နှင့် OFC အတွက်ဆုလာဘ်-related အပြောင်းအလဲနဲ့ထိခိုက်စေသောအကြံပြုအပ်ပါသည်။
ဒီလေ့လာမှုကဖြည့်ခြင်းနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုအောက်မှာရလဒ်ကိုအပြောင်းအလဲနဲ့မှ striatal တုံ့ပြန်မှုတို့၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများရန်ကြိုးစားနေခြင်းဖြင့်လူ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းအပေါ်စူးရှသောစိတ်ဖိစီးမှု၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုဆန်းစစ်ကြီးထွားလာသောစာပေကိုကြီးထွားများပြားစေ။ ယခင်လေ့လာမှုများကွဲပြားခြားနားသော Paradigm နှင့်စစ်ကူသုံးပြီးစိတ်ဖိစီးမှုအောက်မှာ striatal တုံ့ပြန်မှုမော်ဂျူပြသခဲ့ကြသည်။ ဥပမာ, မူလတန်းဆုလာဘ် (အစားအစာပုံရိပ်တွေ) မှ putamen တုံ့ပြန်မှုအတွက်စူးရှသောစိတ်ဖိစီးမှု-related လျှော့ချ et al မွေးဖွားခဲ့ပြီး (ရှုလေ့လာခဲ့ကြ။ , 2009), အရာ caudate နှင့် putamen နှစ်ဦးစလုံးအတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာလက်ရှိပါရာဒိုင်းအတွက်အလယ်တန်းစစ်ကူ၏ရလဒ်ကိုအပြောင်းအလဲနဲ့ဖြည့်။ ၏အကျိုးဆက်များအပြောင်းအလဲနဲ့ဆုချမှ sensitivity ကိုလျော့နည်းသွားအနာဂတ်သုတေသနအတွက်မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်, သို့သော်အသက်တာကိုစိတ်ဖိစီးမှုတိုးလာနှင့်ဆုလာဘ် (ဆိုလိုသည်မှာ, အပြုသဘောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတုံ့ပြန်ချက်) မှ ventral striatum reactivity ကိုလျှော့ချကြောင်းအကြံပြုလတ်တလောလေ့လာမှုအားဖြင့်အကြောင်းကြားသည်ကိုအပြုသဘော၏အနိမ့်အဆင့်ဆင့်ကိုထိခိုက်ကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့အပြန်အလှန် တစ်ဦးစိတ်ကျရောဂါစကေး (Nikolova et al ။ , အပေါ် 2012) ။ T ကစူးရှသောကဖိစီးမှု (Bogdan နှင့် Pizzagalli အောက်မှာဆုလာဘ်မှတုန့်ပြန်နေတဲ့လျော့ချရေးကိုညွှန်းသည်ယခင်အမူအကျင့်အလုပ်နဲ့သူ့ရဲ့ convergence, 2006) အရာလက်ရှိလေ့လာမှုစူးရှသောစိတ်ဖိစီးမှုထိတွေ့ပြီးနောက် dorsal striatum အတွက်ဆုလာဘ်-related တုံ့ပြန်မှုအတွက်လျှော့ချများ၏လေ့လာရေးနှင့်အတူအပေါ်သို့ဆော။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုကနေတစ်ခုစိတ်ဝင်စားဖို့လေ့လာရေးစိတ်ဖိစီးမှုမော်ဂျူအကျိုးသက်ရောက်မှု ventral, striatum အဆိုပါ dorsal အတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာပေမယ့်မခံခဲ့ရသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ တစ်ဦးကအတည်မဖြစ်သေးသောတွေ့ရှိချက်, သို့သော်, (တကယ်တော့အတွက်စိတ်ဖိစီးမှု-related ventral striatal activation non-ဆုလာဘ်-related task ထဲမှာလေ့လာတွေ့ရှိထားပါတယ် ventral striatum တုံ့ပြန်မှု၏စိတ်ဖိစီးမှုမော်ဂျူ၏မရှိခြင်းအဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူမဖြစ်သင့်; Pruessner et al ။ , 2008); အစားကြောင့်ဥပမာ Sinha et al (မော်ဂျူအလေးပေးဖို့ dorsal striatum လှုပ်ရှားမှုများ၏ sensitivity ကိုမီးမောင်းထိုးပြ။ , 2005) ။ အဆိုပါ dorsal striatum, အထူးသဖြင့် caudate မကြာခဏစေ့စ့စပ်စပ်လက်ရှိစက္ကူ (ပြန်လည်သုံးသပ်ဘို့, Delgado တွေ့မြင်အတွက်အသုံးပြုတဲ့ဆုလာဘ်ပါရာဒိုင်းနေဖြင့်စုဆောင်းခံရဖို့ကိုတွေ့ထားပြီ 2007) ။ ထို့ပြင်အဆိုပါ dorsal striatum ဖြစ်နိုင်သောအနာဂတ်ဟောကိန်းထုတ်သော ventral သောအဘို့ကိုတစ်ဦး "ဝေဖန်ရေး" နေစဉ်, အတိတ်မြား၏ရလဒ်များအပေါ် အခြေခံ. အနာဂတ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေလမ်းပြအရေးယူ-ဆက်ပြောပါတယ်တုံ့ပြန်မှု-ဆုလာဘ်အသင်းအဖွဲ့များအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုထိန်းသိမ်းထားကြောင်းတစ်ခု "သရုပ်ဆောင်" အဖြစ်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် posited ထားပြီး ဆုလာဘ် (O'Doherty et al ။ , 2004; Tricomi et al ။ , 2004) ။ T ကHUS, ရလဒ်များဒဏျခတျ vs. ကြိုးများအကြားခွဲခြားဖို့ dorsal striatum များ၏စွမ်းရည်ကို impairing အားဖြင့်စူးရှသောစိတ်ဖိစီးမှုအနာဂတ်ရွေးချယ်မှုလမ်းပြအတိတ်ဆုံးဖြတ်ချက်များအားဖြင့်ထောက်ပံ့အချက်အလက်များ၏အသုံးပြုမှုနှင့်အတူရောက်စွက်ဖက်လိမ့်မည်။
အဆိုပါ dorsal striatum သူ့ဟာသူအတွင်းတစ်ဦး functional subdivision ဟာနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အဘို့ကိုခညျြနှောငျလေ့နှင့်လှုံ့ဆော်မှုဆုံးဖြတ်ချက်များ mediates သော်လည်းအဆိုပါ dorsal striatum ရဲ့ medial ဆက်ဆံပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရည်မှန်းချက်-oriented နှင့်အရေးယူ-ဆက်ပြောပါတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်းအကြံပြု (Balleine et al ။ , 2007; Tricomi et al ။ , 2009) ။ လက်ရှိစမ်းသပ်မှုများတွင်က dorsomedial striatum (ဆိုလိုသည်မှာ caudate) နှင့် dorsolateral striatum (ဆိုလိုသည်မှာ putamen) တွင်လေ့လာတွေ့ရှိ BOLD signal ကိုအတွက်စိတ်ဖိစီးမှု-related အပြောင်းအလဲများကိုဆုံးဖြတ်ချက်ရလဒ်များကို၏လေ့အပြောင်းအလဲနဲ့ဖို့ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားထားရာမှတစ်ဦးပြောင်းကုန်ပြီ၏အစအဦးအထိမ်းအမှတ်ကြောင်းယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည် နောက်ထပ်အလုပ်တခုကိုထိခိုက်သင်ယူမှုပါရာဒိုင်းကိုအသုံးပြုပြီးဒီယူဆချက်ကိုစမ်းသပ်ဖို့လိုအပ်ပေမယ့်။ အဆိုပါအယူအဆ '' ဆာအေးစက်၌ရှိသကဲ့သို့, (ဆိုလိုသည်မှာ habitual ဖို့ရည်မှန်းချက်-oriented ကနေဆုံးဖြတ်ချက်-related အပြောင်းအလဲနဲ့ပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းစိတ်ဖိစီးမှု၏ထောက်ခံမှုအတွက်ယခင်အမူအကျင့်အလုပ်နှင့်ကိုက်ညီလျက်ရှိ၏ Schwabe နှင့် Wolf က, 2011). အရေးကြီးတာက, အ dorsal striatum အတွက်အပြောင်းအလဲနဲ့ဆုချမှ sensitivity ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်ရိုသေလေးစားမှုနှင့်အတူအရေးကြီးသောလက်တွေ့ applications များရှိသည်နှင့်တဦးတည်းရဲ့ယေဘုယျကိုထိခိုက်စေခြင်းငှါလျော့နည်းသွားသည်။ ဥပမာ, dorsal striatal function ကိုအတွက် stress- နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး-cue ဆက်စပ်ပွောငျးလဲမူးယစ်ဆေး / အရက် addictio အတွက် relapse ်ပတ်သက်နေကြပြီn (Sinha နဲ့ Li, 2007) နှင့် ဆုလာဘ်လျှော့ချ dorsal striatal တုံ့ပြန်မှုအဓိကစိတ်ကျရောဂါရောဂါ (ခံစားနေရပြီး unmedicated တစ်ဦးချင်းစီအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိပြီPizzagalli et al ။ , 2009).
ဆုလာဘ်-ဆက်စပ်သတင်းအချက်အလက်အပြောင်းအလဲနဲ့်ပတ်သက်နေနောက်ထပ်ဦးနှောက်ဒေသကဒီစမ်းသပ်မှုတွင်လည်းဆုလာဘ်များနှင့်ပြစ်ဒဏ်များမှတုန့်ပြန်မြားတှငျပွောငျးလဲပြရသော OFC ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာဒီဒေသကပြောပါတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ရလဒ်များကို၏ပုဂ္ဂလဒိဋ္တန်ဖိုး coding အားဖြင့်ရလဒ်ကိုအကဲဖြတ်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်စေခြင်းငှါအကြံပြုထားသည် (O'Doherty et al ။ , 2001a) ။ ဥပမာအားဖြင့်, BOLD OFC အတွက်တိုးမြှင့်ခြင်းကိုမနှစ်သက် gustatory လှုံ့ဆော်မှု (O'Doherty et al နှိုင်းယှဉ်ပါကသာယာသော၏ပေးပို့စဉ်အတွင်းလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ , 2001b) ။ ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့စဉ်အတွင်းဦးနှောက် function ကိုအတွက်စိတ်ဖိစီးမှု-related လျှော့ချအတန်ငယ်ထိုကဲ့သို့သော medial PFC (Ossewaarde et al ကဲ့သို့သောအိမ်နီးချင်း prefrontal ဒေသများတွင်ကိုလေ့လာခဲ့ကြပေမယ့်။ , 2011) OFC ကြောင့်အနာဂတ်သုတေသနတစ်ခုစံပြခေါင်းစဉ်အောင်, ဤကိစ်စတှငျလျော့နည်းအာရုံစူးစိုက်မှုကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ (Schoenbaum နှင့် Shaham ပြန်သွားကြသည်မှဦးဆောင် - ဤဒေသတွင်ဖွယ်ရှိရလဒ်များသို့မဟုတ်အကျိုးဆက်များအပေါ်အခြေခံပြီးသူတို့ရဲ့အပြုအမူပြောင်းလဲပစ်ရန်စွဲ၏နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းအတွက်အခန်းကဏ္ဍစခွေငျးငှါအတိုင်းဤအထူးသဖြင့်မူးယစ်ဆေးစွဲအပေါ်စိတ်ဖိစီးမှု၏သက်ရောက်မှုမှလေးစားမှုနှင့်အတူအမှုဖြစ်ပါသည် 2008) ။ တစ်ဦးကကလွဲရင်ဆုချ-ဆက်စပ်ဖို့သတင်းအချက်အလက် (ဥပမာ Schwabe et al OFC sensitivity ကိုအတွက်လျှော့ချအတွက်တစ်ပြိုင်တည်းပါ, CA များနှင့် glucocorticoid activation များ၏လိုအပ်ချက်အကြံပြုခြင်းလတ်တလောလေ့လာမှုဖြစ်ပါတယ်။ , 2012).
လက်ရှိလေ့လာမှု၏တွေ့ရှိချက်များကိုအခြေခံသည့်ယန္တရားမှလေးစားမှုနှင့်အတူအများအပြားယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူထည့်သွင်းစဉ်းစားစေနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာထိုကဲ့သို့သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်း (ဥပမာ McRae et al နှငျ့ပတျသကျသောဖိအားကဲ့သို့သောအခြားစိတ်ဖိစီးမှုကိုသော induction နည်းစနစ်အတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာခဲ့ကြခြင်းထက်အအေး pressor စိတ်ဖိစီးမှုမှ glucocorticoid တုံ့ပြန်မှုလျော့နည်းအစွန်းရောက်ဖြစ်ကြောင်းထူထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ , 2006; Schwabe et al ။ , 2008) ။ လက်ရှိလေ့လာမှုမှာ, ဒီ cortisol အတွက်ပျော့-to-အလယ်အလတ်လူတန်းစားစိတ်ဖိစီးမှုအုပ်စုကိုတိုးခြင်းဖြင့်ထင်ဟပ်နေသည်။ ဆနျ့ကငျြ, ကစာနာပေးစေလိုပါတယ် activation အအေး pressor နှင့်စိတ်ဖိစီးမှု၏အခြားပုံစံများအကြားနှိုင်းယှဉ်ဖြစ်နေဆဲကြောင်းဖွယ်ရှိသည်။ နောက်ထပ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှာလက်ရှိလေ့လာမှုကနဦးစူးရှသောစိတ်ဖိစီးမှုထိတွေ့ကြိုတင်တာဝန်ခန့်မှန်းပထမဦးဆုံးကဒ်ကိုချက်ချင်းဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကြောင်း, 15 နောက်တော်သို့လိုက်သည်ကို တာဝန်ခန့်မှန်းဒုတိယစိတ်ဖိစီးမှုထိတွေ့မှုနှင့်ကဒ်အားဖြင့်နောက်ပိုင်းတွင် min ။ ပါရာဒိုင်း၏ဤအမျိုးအစားတွင် glucocorticoid လွှတ်ရာသို့သက်ရောက်မှုဖွယ်ရှိဆိုလိုသည်မှာနှေးကွေးခြင်းနှင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာတည်မြဲ (Genomics ပါလိမ့်မယ်သကဲ့သို့၎င်း, Sapolsky et al ။ 2000) ကသူတို့ပထမဦးဆုံးတာဝန်ပြေးအတွက်ဦးနှောက် function ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးမပြုခဲ့ကြောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သို့သျောလညျး, ဆုချ-ဆက်စပ်ဖို့သတင်းအချက်အလက် striatal နှင့် OFC တုန့်ပြန်အတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာကျဆင်းခြင်းနှစ်ဦးစလုံးအလုပ်တစ်ခုကိုပြေးအတွက်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ cortisol အတွက်စိတ်ဖိစီးမှု-related တိုးကဒီမှာကျိုးနွံခဲ့ကြအဖြစ်ထပ်မံပြုလုပ် glucocorticoids မှာအားလုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအထောက်အကူပြုမပြုခဲ့ကြောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်စာနာပေးစေလိုပါတယ် activation (ဥပမာ, အရေပြား conduction သို့မဟုတ်တံထွေး alpha amylase ၏ဒိုင်းနမစ်အားဟောပြောနိုင်သောအချက်အလက်များ၏မရှိခြင်း; ။ Rohleder et al, 2004) လေ့လာမှုတစ်ခုန့်အသတ်ရှိပါသည်။ ဒီနေရာမှာအလုပ်ခန့်သည့်ပါရာဒိုင်းသည်ဤပြဿနာများကိုဖြေရှင်းရန်ဒီဇိုင်းမခံခဲ့ရပေမယ့်, က Contextual အချက်များစိတ်ဖိစီးမှုထိတွေ့မှုနှင့်လုပ်ငန်းတာဝန်ကစားအရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ဆုလာဘ်-ဆက်စပ်သတင်းအချက်အလက်များ၏ mode ကို၏သဘောသဘာဝနှင့်အချိန်ကိုက်အပါအဝင်ကြောင်းဖွယ်ရှိသည်။
အချို့လေ့လာမှုများလိင်ကွဲပြားမှု striatal ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်စိတ်ဖိစီးမှု-related ပွောငျးလဲတစ်ကဏ္ဍမှပါစေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, အန္တရာယ်-tasking အပေါ်စူးရှသောစိတ်ဖိစီးမှု၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုဆန်းစစ်လေ့လာမှုများကျား, မတစ်ဦး function ကို (Lighthall et al အဖြစ် dorsal striatal function ကိုအတွက်အတက်အကျကိုထူထောင်ကြ။ , 2009, 2011) ။ အဲဒီမှာသင်တန်းသားများကိုငွေကြေးဆုလာဘ်တစ်ခုကို virtual ပူဖောင်းကိုချဲ့ထွင်ရန်ခလုတ်စာနယ်ဇင်းအောင်ကပါဝငျသောလေဘောလုံးအင်နာလော့အန္တရာယ် Task ကို, ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ တစ်ဦးချင်းစီ button ကိုစာနယ်ဇင်းနှင့်အတူငွေကြေးပိုမိုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် - ဒါပေမယ့်အချို့အချက်မှာပူဖောင်းပေါက်ကွဲပါလိမ့်မယ်။ ထို့ကြောင့်သင်တန်းသားများကိုသူတို့နောက်ထပ်ဆုလာဘ်ရဖို့ရန်ပူဖောင်းကိုချဲ့ထွင်ရန်ဆက်လက်မယ်ဆိုရင်အားလုံးအနိုင်ရရှိတဲ့ဆုံးရှုံးအန္တာရာယ်။ ဒါဟာအဘယ်သူမျှမစိတ်ဖိစီးမှုသင်တန်းသားများကိုနှိုင်းယှဉ်ပါကအမျိုးသမီး, ပြောင်းပြန်ပုံစံကိုပြသသော်လည်းစူးရှသောကဖိစီးမှုအထီးအောက်မှာ dorsal striatal function ကိုပိုမိုအန္တရာယ်များနှင့်ပြပွဲတိုးယူကြောင်းလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်။ လက်ရှိလေ့လာမှုများတွင်အလားတူလိုင်းတစ်လျှောက်လိင်ခြားနားချက်ဆီသို့တစ်ဦးလမ်းကြောင်းသစ်ကိုလည်း dorsal striatum အတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ပါသည် - ငယျဆုံးသောဒီဂရီမှသော်လည်း။ အဘယ်သူမျှမစိတ်ဖိစီးမှုအမျိုးသမီး '' BOLD ရလဒ်များအဘို့ယောက်ျားအထက်သို့ခြီးမွှောကျခံခဲ့ရ '' ။ ရလဒ်များမှ BOLD အချက်ပြမှုများကို acute အလေးပေးအမျိုးသမီးများအတွက်ကျဆင်းခြင်းလုပ်ခဲ့တယ်နှင့်ယောက်ျားပေါင်းဘို့တိုးမြှင့်နေစဉ်, ရလဒ်ကတော့ Lighthall et al ပိုမိုလွန်ကဲဖြစ်ခဲ့သည်။ (2009, 2011) လေ့လာမှုများ။ ဤသည်မှာလည်းလိုအပ်သင်တန်းသားများကိုအလားအလာပြစ်ဒဏ်ဆန့်ကျင်အလားအလာဆုလာဘ်ဟန်ချက်ညီရှုပ်ထွေးရွေးချယ်မှုလုပ်စဉ်ဖြစ်သည့်ပူဖောင်းတာဝန်အဖြစ်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေတာဝန်များကိုတစ်ခုရလဒ်ကိုအကဲဖြတ်အစိတ်အပိုင်းအပြင်အလားအလာရလဒ်များ၏မျှော်လင့်ပါဝင်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဆက်စပ်ပေမည်။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုမှာအသုံးပြုတဲ့ရိုးရှင်းတဲ့ရလဒ်ကိုအကဲဖြတ်ပါရာဒိုင်းပိုပြီးပြောင်းလဲနေသောနှင့်ရှုပ်ထွေးသောအန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေ Paradigm ထက်လိင်ကွဲပြားမှုမှလျော့နည်းထိခိုက်မခံသောအမှုဖြစ်နိုင်သည်။
ပေါင်းလဒ်အတွက်, ဒီစာတမ်း fMRI စကင်နာ (ချမ်း pressor လက်မောင်းထုပ်ပိုးပြီး) တွင်စိတ်ဖိစီးမှုသွေးဆောင်ဖို့ဝတ္ထုချဉ်းကပ်တဲ့ဆုလာဘ်-related circuitry modulated စူးရှသောကဖိစီးမှုမှထိတွေ့လေ့လာသည်။ အထူးသစိတ်ဖိစီးမှုအောက်မှာသင်တန်းသားများ dorsal striatum နှင့် OFC အတွက်ဆုချခြင်းနှင့်ပြစ်ဒဏ်ပေးရန် differential ကိုတုံ့ပြန်မှုလျော့နည်းသွားပြသခဲ့သည်။ အနာဂတ်လေ့လာမှုများဥပမာမှေးဖှား et al, ဒီလျော့နည်းသွားပါလျှင်ယခင်ကစာပေလေ့လာအဖြစ် differential ကိုတုန့်ပြန်ဆုလာဘ်တစ်ခုလျော့နည်းသွားတုံ့ပြန်မှု (ကမောင်းနှင်နေသည်စုံစမ်းဖို့ကြိုးစားလိမ့်မည်။ , 2009) သို့မဟုတ်အနုတ်လက္ခဏာရလဒ်များမှ sensitivity ကိုတစ်ခုတိုး။ ထို့ပြင်နောက်ထပ်သုတေသနသည်ဤကွဲပြားစစ်ကူမှတုံ့ပြန်မှုစိတ်ဖိစီးမှုအောက်မှာနောက်ဆက်တွဲဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းကိုသြဇာလွှမ်းမိုးစေခြင်းငှါ, ဘယ်လိုအာရုံကြောရှင်းလင်းဖို့လိုတယျ။
ဒါဟာသုတေသန Mauricio R. Delgado (R01DA027764) အားမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအပေါ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အင်စတီကျုကနေငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်းဖြင့်ထောက်ခံခဲ့သည်။
Balleine BW, Delgado MR, Hikosaka O. (2007) ။ ဆုလာဘ်များနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းအတွက် dorsal striatum ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ ဂျေ neuroscience ။ 27, 8161-8165 ။ Doi: 10.1523 / JNEUROSCI.1554-07.2007 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Balleine BW, O'Doherty JP (2010) ။ အရေးယူထိန်းချုပ်လူ့ခြင်းနှင့်ကြွက် homologies: ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားခြင်းနှင့်လေ့လုပ်ဆောင်ချက် corticostriatal ပြဌာန်းခွင့်။ Neuropsychopharmacology 35, 48-69 ။ Doi: 10.1038 / npp.2009.131 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Bogdan R. , Pizzagalli DA (2006) ။ acute စိတ်ဖိစီးမှုဆုလာဘ်တုန့်ပြန်မှုကိုလျော့နည်းစေ: စိတ်ကျရောဂါများအတွက်ဂယက်ရိုက်။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 60, 1147-1154 ။ Doi: 10.1016 / j.biopsych.2006.03.037 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
မှေးဖှား JM, Lemmens စင်ကာပူဒေါ်လာ, Rutters အက်ဖ်, Nieuwenhuizen AG က, Formisano အီး, Goebel R. , et al ။ (2009) ။ acute စိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှု၏မရှိခြင်းအတွက်အစာစားနေစဉ်အတွင်းအစားအစာရွေးချယ်မှုစဉ်အတွင်းဦးနှောက်အတွက်အစာအာဟာရ-ဆက်စပ်ဆုလာဘ် activation ။ int ။ ဂျေအဝလွန်ခြင်း။ (Lond ။ ) 34, 172-181 ။ Doi: 10.1038 / ijo.2009.221 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Cannon သည့် WB (1915) ။ ကာယနာကျင်မှု, Hunger အတွက်အပြောင်းအလဲများ, ကြောက်လန့်ခြင်းနှင့် Rage: စိတ်ခံစားမှုစိတ်လှုပ်ရှား၏ Function သို့မကြာမီကသုတေသနတစ်ခုကအကောင့်ကို။ နယူးယောက်: ဃ Appleton မှာနေတဲ့အကြောင်းနှင့်ကုမ္ပဏီများ။
Cavanagh JF, ဖရန့် MJ, Allen က JJ (2010) ။ လူမှုစိတ်ဖိစီးမှု reactivity ကိုဆုလာဘ်များနှင့်ပြစ်ဒဏ်သင်ယူမှုပွောငျးလဲ။ Soc ။ Cogn ။ အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ neuroscience ။ 6, 311-320 ။ Doi: 10.1093 / စကင် / nsq041 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Delgado MR (2007) ။ လူ့ striatum အတွက်ဆုလာဘ်-related တုံ့ပြန်မှု။ အမ်း။ နယူးယော့ Acad ။ သိပ္ပံ။ 1104, 70-88 ။ Doi: 10.1196 / annals.1390.002 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Delgado MR, ဂျွန်လော့ခ် HM, Stenger VA သို့, Fiez ဂျေအေ (2003) ။ ဆုချခြင်းနှင့်ပြစ်ဒဏ်ပေးရန် Dorsal striatum တုံ့ပြန်မှု: valence နှင့်ပြင်းအားထိန်းသိမ်းရေး၏ဆိုးကျိုးများ။ Cogn ။ အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ ပြုမူနေ။ neuroscience ။ 3, 27-38 ။ Doi: 10.3758 / CABN.3.1.27 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Delgado MR, Nystrom LE, Fissell C. , Noll, DC, Fiez ဂျေအေ (2000) ။ အဆိုပါ striatum အတွက်ဆုချခြင်းနှင့်ပြစ်ဒဏ်ပေးရန် hemodynamic တုံ့ပြန်မှုခြေရာခံ။ ဂျေ Neurophysiol ။ 84, 3072-3077 ။ [PubMed]
et al Dias-Ferreira အီး, Sousa JC, Melo အဘိဓါန်ဗြဲ, Morgado P. , Mesquita AR, Cerqueira JJ ။ (2009) ။ နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှု frontostriatal ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြစ်စေသည်နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းသက်ရောက်သည်။ သိပ္ပံ 325, 621-625 ။ Doi: 10.1126 / science.1171203 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Forman SD, Cohen ကို JD, Fitzgerald အမ်, Eddy WF, Mintun, MA, Noll DC က (1995) ။ အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် (fMRI) တွင်သိသာထင်ရှားသော activation ၏တိုးတက်လာသောအကဲဖြတ်: တစ်စပျစ်သီးပြွတ်-size ကိုတံခါးခုံကိုအသုံးပြုခြင်း။ Magn ။ ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှု။ Med ။ 33, 636-647 ။ Doi: 10.1002 / mrm.1910330508 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Goebel R. , Esposito အက်ဖ်, Formisano အီး (2006) ။ အလုပ်လုပ်တဲ့ image ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြိုင်ပွဲ (FIAC) brainvoyager QX နှင့်အတူအချက်အလက်များ၏ analysis: Single-ဘာသာရပ်ကနေ cortical aligned အုပ်စုကိုယေဘုယျ linear မော်ဒယ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့် Self-စည်းရုံးရေးအဖွဲ့ကိုလွတ်လပ်သောအစိတ်အပိုင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်။ Hum ။ ဦးနှောက် Mapp ။ 27, 392-401 ။ Doi: 10.1002 / hbm.20249 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Haber SN, Knutson ခ (2010) ။ အကျိုးကိုဆားကစ်: မျောက်ခန္ဓာဗေဒနှင့်လူ့ပုံရိပ်ချိတ်ဆက်။ Neuropsychopharmacology 35, 4-26 ။ Doi: 10.1038 / npp.2009.129 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Holmes အက်စ် (1979) ။ ရိုးရှင်းတဲ့ဆင့်ကဲမျိုးစုံစမ်းသပ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း rejective ။ Scand ။ ဂျေ Stat ။ 6, 65-70 ။
Huettel လုပ် SA, သီချင်း AW, ဆက်မက်ကာသီ G. အ (2008) ။ functional သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှု Imaging, 2nd Edn ဆန်းဒါးလန်း, MA: Sinauer Associates မှ, Inc
Joel အမ်, ပူး Z. , Wiegert O. , Oitzl က MS, Krugers HJ (2006) ။ စိတ်ဖိစီးမှုအောက်မှာသင်ယူခြင်း: ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ, ခေတ်ရေစီးကြောင်း Cogn ။ သိပ္ပံ။ (စည်းမျဉ်းများ။ Ed က။ ) 10, 152-158 ။ Doi: 10.1016 / j.tics.2006.02.002 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Lighthall ရော်ဘာ, Mather အမ်, Gorlick MA (2009) ။ acute စိတ်ဖိစီးမှုဟာပူဖောင်း analogue အန္တရာယ်တာဝန်အတွက်ရှာကြံအန္တရာယ်အတွက်လိင်ကွဲပြားမှုတိုးပွားစေပါသည်။ PLoS ONE 4, e6002 ။ Doi: 10.1371 / journal.pone.0006002 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Lighthall ရော်ဘာ, Sakaki အမ်, Vasunilashorn အက်စ်, Nga L. , Somayajula အက်စ်, ချန် EY, et al ။ (2011) ။ စိတ်ဖိစီးမှုအောက်မှာဆုလာဘ်-related ဆုံးဖြတ်ချက်အပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်ကျားမကွဲပြားခြားနားမှု။ Soc ။ Cogn ။ အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ neuroscience ။ 7, 476-484 ။ Doi: 10.1093 / စကင် / nsr026 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Lupien SJ, Maheu အက်ဖ်, Tu အမ်, Fiocco အေ, Schramek TE (2007) ။ လူ့သိမှတ်ခံစားမှုအပေါ်စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့စိတ်ဖိစီးမှုဟော်မုန်း၏သက်ရောက်မှု: ဦးနှောက်နှင့်သိမှတ်ခံစားမှု၏လယ်ပြင်များအတွက်ဂယက်ရိုက်။ ဦးနှောက် Cogn ။ 65, 209-237 ။ Doi: 10.1016 / j.bandc.2007.02.007 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Mather အမ်, Gorlick MA, Lighthall ရော်ဘာ (2009) ။ ဘရိတ်ဖို့ဒါမှမဟုတ်အလင်းအဝါရောင်အဖြစ်ပြောင်းသွားသည့်အခါအရှိန်မြှင့်? စိတ်ဖိစီးမှုတစ်ဦးမောင်းနှင်ဂိမ်းအတွက်အဟောင်းတွေလူကြီးများ '' အန္တရာယ်ဆည်းပူးနေလျော့ကျစေပါတယ်။ Psychol ။ သိပ္ပံ။ 20, 174-176 ။ Doi: 10.1111 / j.1467-9280.2009.02275.x ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
McRae AL, Saladin ME, Brady KT, Upadhyaya အိပ်ချ်, Back ကို SE, Timmerman MA (2006) ။ စိတ်ဖိစီးမှု reactivity ကို: ချမ်း pressor နှင့် Trier လူမှုရေးဖိအားဇီဝဗေဒနှင့်ပုဂ္ဂလဒိဋ္တုံ့ပြန်မှု။ Hum ။ Psychopharmacol ။ 21, 377-385 ။ Doi: 10.1002 / hup.778 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Nikolova YS, Bogdan R. , Brigidi bd, Hariri AR (2012) ။ ဆုချမှ Ventral striatum reactivity ကိုများနှင့်မကြာသေးမီဘဝစိတ်ဖိစီးမှုထိခိုက်စေအပြုသဘောကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့အပြန်အလှန်။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 72, 157-163 ။ Doi: 10.1016 / j.biopsych.2012.03.014 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
O'Doherty ဂျေဒါယန်းပီ, Schultz ဂျေ, Deichmann R. , Friston K. , Dolan RJ (2004) ။ ဆာအေးစက်အတွက် ventral နှင့် dorsal striatum ၏ Dissociable အခန်းကဏ္ဍ။ သိပ္ပံ 304, 452-454 ။ Doi: 10.1126 / science.1094285 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
O'Doherty ဂျေ, Kringelbach ML, Rolls ET, Hornak ဂျေ, Andrews က C. (2001a) ။ လူ့ orbitofrontal cortex အတွက်စိတ္တဇဆုလာဘ်များနှင့်ပြစ်ဒဏ်ကိုယ်စားပြုသည်။ နတ်။ neuroscience ။ 4, 95-102 ။ Doi: 10.1038 / 82959 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
O'Doherty ဂျေ, Rolls ET, Francis ကအက်စ်, Bowtell R. , McGlone အက်ဖ် (2001b) ။ လူ့ဦးနှောက်ထဲမှာသာယာသောနှင့်ဆန္ဒရှိအရသာ၏ကိုယ်စားပြုမှု။ ဂျေ Neurophysiol ။ 85, 1315-1321 ။ [PubMed]
Ossewaarde L. , Qin အက်စ်, ဗန် Marle HJ, ဗန် Wingen GA, ဖာနန်ဒက်ဇ G. အ, Herman EJ (2011) ။ ဆုလာဘ်-related prefrontal cortex function ကိုအတွက်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်လျော့ချရေး။ Neuroimage 55, 345-352 ။ Doi: 10.1016 / j.neuroimage.2010.11.068 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Petzold အေ, Plessow အက်ဖ်, Goschke တီ, Kirschbaum C. (2010) ။ စိတ်ဖိစီးမှုတစ်ဦးတုံ့ပြန်ချက်-based သင်ယူမှုလုပ်ငန်းတာဝန်များတွင်အနုတ်လက္ခဏာတုံ့ပြန်ချက်၏အသုံးပြုမှုကိုလျော့ကျစေပါတယ်။ ပြုမူနေ။ neuroscience ။ 124, 248-255 ။ Doi: 10.1037 / a0018930 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Pizzagalli DA, ကေတီဟုမ်း AJ, Dillon DG, Goetz EL, Birk JL, Bogdan R. , et al ။ (2009) ။ လျှော့ချ caudate နှင့်နျူကလိယကိုအဓိကစိတ်ကျရောဂါရောဂါနှင့်အတူ unmedicated တစ်ဦးချင်းစီအတွက်ဆုလာဘ်တုံ့ပြန် accumbens ။ နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု 166, 702-710 ။ Doi: 10.1176 / appi.ajp.2008.08081201 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Porcelli AJ, Delgado MR (2009) ။ acute စိတ်ဖိစီးမှုဘဏ္ဍာရေးဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းအတွက်အန္တရာယ်ဆည်းပူးနေ modulates ။ Psychol ။ သိပ္ပံ။ 20, 278-283 ။ Doi: 10.1111 / j.1467-9280.2009.02288.x ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Preston SD, Buchanan TW, Stansfield RB, Bechara အေ (2007) ။ တစ်လောင်းကစားလုပ်ငန်းတာဝန်များတွင်အောင်ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် anticipatory စိတ်ဖိစီးမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ ပြုမူနေ။ neuroscience ။ 121, 257-263 ။ Doi: 10.1037 / 0735-7044.121.2.257 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Pruessner JC, Dedovic K. , et al Khalili-Mahani N. , Engert V. , Pruessner အမ်, Buss C. ။ (2008) ။ positron ထုတ်လွှတ် tomography နှင့် functional သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်လေ့လာမှုများအနေဖြင့်သက်သေအထောက်အထားများ: စူးရှသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှုစဉ်အတွင်း limbic စနစ်၏ Deactivate ။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 63, 234-240 ။ Doi: 10.1016 / j.biopsych.2007.04.041 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Pruessner JC, Kirschbaum C. , Meinlschmid G. အ, Hellhammer DH (2003) ။ အဆိုပါကွေးအောက်ရှိဧရိယာ၏တွက်ချက်မှုနှစ်ခုဖော်မြူလာအချိန်-မှီခိုပြောင်းလဲမှုနှိုင်းယှဉ်စုစုပေါင်းဟော်မုန်းအာရုံစူးစိုက်မှု၏အတိုင်းအတာကိုကိုယ်စားပြုသည်။ Psychoneuroendocrinology 28, 916-931 ။ Doi: 10.1016 / S0306-4530 (02) 00108-7 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Rangel အေ, Camerer C. , မွန်တဂူ PR စနစ် (2008) ။ တန်ဖိုးအား-based ဆုံးဖြတ်ချက်ချ၏ neurobiology လေ့လာနေဘို့တစ်ဦးကမူဘောင်။ နတ်။ ဗျာ neuroscience ။ 9, 545-556 ။ Doi: 10.1038 / nrn2357 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Rohleder N. , Nater um, Wolf က JM, Ehlert U. , Kirschbaum C. (2004) ။ တံထွေး alpha-amylase ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် activation: စာနာလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုညွှန်ပြချက်? အမ်း။ နယူးယော့ Acad ။ သိပ္ပံ။ 1032, 258-263 ။ Doi: 10.1196 / annals.1314.033 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Sapolsky RM, ရိုမီယို LM, Munck အာဖရိကသမဂ္ဂ (2000) ။ ဘယ်လို glucocorticoids စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုကိုသြဇာလွှမ်းမိုးသလဲ? အလိုလို, ဖိနှိပ်မှု, stimulatory နှင့်ပြင်ဆင်မှုလုပ်ရပ်များပေါင်းစပ်။ Endocr ။ ဗျာ 21, 55-89 ။ Doi: 10.1210 / er.21.1.55 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Schoenbaum G. အ, Shaham Y. (2008) ။ မူးယစ်ဆေးစွဲအတွက် orbitofrontal cortex ၏အခန်းကဏ္ဍကို: preclinical လေ့လာမှုများ၏သုံးသပ်ချက်။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 63, 256-262 ။ Doi: 10.1016 / j.biopsych.2007.06.003 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Schultz ဒဗလျူ (2006) ။ အမူအကျင့်သီအိုရီနှင့်ဆုလာဘ်များ neurophysiology ။ Annu ။ ဗျာ Psychol ။ 57, 87-115 ။ Doi: 10.1146 / annurev.psych.56.091103.070229 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Schwabe L. , Haddad L. , Schachinger အိပ်ချ် (2008) ။ တစ်ဦးလူမှုရေးအရအကဲဖြတ်အအေး-pressor စမ်းသပ်မှုများက HPA ဝင်ရိုး activation ။ Psychoneuroendocrinology 33, 890-895 ။ Doi: 10.1016 / j.psyneuen.2008.03.001 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Schwabe L. , Tegenthoff အမ်, Hoffken O. , Wolf က OT (2012) ။ တပြိုင်နက်တည်း glucocorticoid နှင့် noradrenergic လှုပ်ရှားမှုလူ့ဦးနှောက်ထဲမှာရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားလုပ်ဆောင်ချက်၏အာရုံကြောအခြေခံ disrupts ။ ဂျေ neuroscience ။ 32, 10146-10155 ။ Doi: 10.1523 / JNEUROSCI.1304-12.2012 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Schwabe L. , Wolf က OT (2011) ။ ဆာအပြုအမူ၏စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်မော်ဂျူ: ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားထားရာမှလုပ်ဆောင်ချက်လေ့ထိန်းချုပ်မှုရန်။ ပြုမူနေ။ ဦးနှောက် Res ။ 219, 321-328 ။ Doi: 10.1016 / j.bbr.2010.12.038 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Shor တီဂျေ (2004) ။ စိတ်ဖိစီးမှုကြိမ်အတွင်းသင်ယူခြင်း။ လေ့လာပါ။ Mem ကို။ 11, 137-144 ။ Doi: 10.1101 / lm.66604 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
et al Sinha R. , Lacadie C. , Skudlarski P. , Fulbright RK, Rounsaville BJ, Kosten TR ။ (2005) ။ စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်ကင်းတဏှာနဲ့ဆက်စပ်အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှု: တစ်အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်လေ့လာမှု။ Psychopharmacology (Berl ။ ) 183, 171-180 ။ Doi: 10.1007 / s00213-005-0147-8 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Sinha R. လီ CSR (2007) ။ imaging stress- နှင့် cue-သွေးဆောင်မူးယစ်ဆေးနှင့်အရက်တဏှာ: relapse နှင့်လက်တွေ့သက်ရောက်မှုနှင့်အတူအသင်းအဖွဲ့။ မူးယစ်ဆေးအရက်ဗျာ 26, 25-31 ။ Doi: 10.1080 / 09595230601036960 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Talairach ဂျေ, Tournoux P. (1988) ။ လူ့ဦးနှောက်၏ co-ပြို Stereotaxic Atlas ။ နယူးယောက်: Thieme ဆေးဘက်။
Tricomi အီး, Balleine BW, O'Doherty JP (2009) ။ လူ့အလေ့အထသင်ယူမှုအတွက် posterior dorsolateral striatum များအတွက်တိကျသောအခန်းကဏ္ဍ။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ neuroscience ။ 29, 2225-2232 ။ Doi: 10.1111 / j.1460-9568.2009.06796.x ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Tricomi EM, Delgado MR, Fiez ဂျေအေ (2004) ။ အရေးယူအရေးပေါ်ခြင်းဖြင့် caudate လှုပ်ရှားမှု Modulation ။ အာရုံခံဆဲလျ 41, 281-292 ။ Doi: 10.1016 / S0896-6273 (03) 00848-1 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Tversky အေ, Kahneman ဃ (2004) ။ Prospect သီအိုရီအတွက်တိုးတက်မှုတွေ: တိုးပွားလာသောမငြိမ်သက်မှုကြောင့်၏ကိုယ်စားပြုမှု, ဦးစားပေးမှု, ယုံကြည်ချက်နှင့်တူညီ: Selected အရေးအသားအာမုတ် Tversky ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကင်းဘရစ်, MA: MIT ကစာနယ်ဇင်း, 673-702 ။
Ulrich-လိုင် YM, Herman JP (2009) ။ endocrine နှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုများ၏အာရုံကြောစည်းမျဉ်း။ နတ်။ ဗျာ neuroscience ။ 10, 397-409 ။ Doi: 10.1038 / nrn2647 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]